နိုင်ငံကျော်ရုပ်ရှင်မင်းသမီး တစ်ဦးနှင့် အိပ်စက်ခြင်း - APANNPYAY
Home / ဗဟုသုတအစုံ / ဘ၀နှင့်အချစ်ကဏ္ဍ / နိုင်ငံကျော်ရုပ်ရှင်မင်းသမီး တစ်ဦးနှင့် အိပ်စက်ခြင်း
နိုင်ငံကျော်ရုပ်ရှင်မင်းသမီး တစ်ဦးနှင့် အိပ်စက်ခြင်း
Apann Pyay 1:59 PM ဗဟုသုတအစုံ , ဘ၀နှင့်အချစ်ကဏ္ဍ Edit
သူ တစ်ရေးနိုးလာတော့ အိပ်ယာဟာ တအားပူနေပြီ။ နာရီက ညနေလေးနာရီ နှစ်ဆယ့်ရှစ် ကို ပြနေပြီ။ အပြင် မှာ နေက မကျသေးဘူး။ ဒီနိုင်ငံမှာ နွေရာသီ ဟာ သေမတတ် ပူတယ်။ ပူလွန်း အားကြီး လွန်းလို့ တစ်ကောင်ခွဲ အားရှိတဲ့ အဲကွန်း ဟာ သူတို့နှစ်ယောက် အိပ်နေတဲ့ အခန်းသေးသေးလေး ကိုပဲ မအေး မအေးနိုင်ဘူး။အိပ်ယာ ရဲ့ ဘေးအစွန်း မှာ တင်လွှဲ ထိုင်ရင်း ညက ချွတ်ထား ခဲ့တဲ့ စတိုင်ပဲန် နဲ့ အတွင်းခံ ကို ပြန်ဝတ် လိုက်တယ်။ ၀တ်ရင်း နဲ့ ဘေးနားမှာ အိပ်မောကျနေဆဲဖြစ်တဲ့ သူ့ရဲ့ အဖော် ကို သူကြည့်လိုက်တယ်။ တကယ်တမ်း သေချာကြည့်မယ် ဆိုရင် သူ့ရဲ့ ည အိပ်ဖော်ဟာ တီဗွီထဲ မှာပဲ ကြည့်ကောင်း တဲ့ ရွက်ကြမ်းရေကျို မိတ်ကပ်ဖုံး အမျိုးသမီး တစ်ယောက်သာ ဖြစ်တယ်။ဒါပေမယ့် လိင်ဆက်ဆံမှု မှာ တကယ်တမ်း က ရုပ်ရည် ဟာ အဓိက မကျဘူးလို့ သူထင်တာ ပဲ။ သေချာကြည့် လိုက်တော့ သူမက အိပ်မော အကျလွန်နေရာ က ပါးစပ်က သားရေတွေ ပါ ထွက်ကျနေတာ ကို တွေ့ရတယ်။ သူ .. မျက်နှာ ကို တစ်ချက် မဲ့လိုက်ပြီး ရေချိုးခန်းထဲ ကို ၀င် လိုက်တယ်။ ရေချိုးခန်းထဲ ကို ၀င်လိုက်တယ် ဆိုတာက ရေချိုးချင် အိမ်သာတက်ချင် လို့ရယ် လို့တော့ မဟုတ်ဘူး။သူ့ရဲ့ ညအိပ်ဖော် ပါးစပ် က ထွက်ကျနေတဲ့ သားရေတွေ ကို ရွံရှာ လာတဲ့ အတွက်ကြောင့်ပဲ။ရေချိုးခန်း ထဲမှာ ဘာလုပ်ရမယ်မှန်း မသိတာကြောင့် အိမ်သာ အိုးပေါ် မှာ ဘောင်းဘီ မချွတ် ဘဲ သူ.. နာရီဝက် လောက်ထိုင်နေဖြစ်လိုက်တယ်။ ဒါမှမဟုတ် နာရီဝက်လောက် ထိုင်နေဖြစ် လိုက်တယ်လို့ စိတ်ကူးပစ်လိုက်တယ်။အိမ်သာ အိုးပေါ်မှာ ဘာမှ မလုပ်ဘဲ နာရီဝက်လောက် ထိုင်နေ လိုက်တာက သားရေတွေ ထွက်ကျအောင် ပိုးစိုး ပက်စက် အိပ်ပျော်နေတဲ့ လူ တစ်ယောက်နား မှာ နေရတာထက် စာရင် အများကြီး ပိုကောင်းမယ် လို့ သူထင်တာပဲ ။ ခဏနေတော့ အိမ်သာ အိုးပေါ်မှာ ထိုင်ရတာကို သူ… ငြီးငွေ့လာပြန်တယ်။ ရေချိုးခန်း အပြင်ဘက်မှာ ရှိတဲ့ သောက်ရေအေးအေးကို သူသောက် ချင်လာတယ်။ဒါပေမယ့် အပြင်ပြန် ထွက်ရင် သားရေနံ့တွေ ထွက်နေတဲ့ သူမ နဲ့ ထပ် တွေ့ရမှာ စိုး တာကြောင့် ရေချိုးခန်းဘေဇင်မှာ ရှိတဲ့ ရေကို သောက်ဖို့ သူကြိုးစား လိုက်တယ်။ သူကြိုးစား လိုက်ပေမယ် လို့ မအောင်မြင် လိုက်ဘူး။ ရေက ကလိုရင်းနံ့ တအားထွက်နေတယ်။ ဘုံဘိုင် က ရေကို သောက်ဖို့ သူ လက်လျှော့လိုက်ပြီး အိပ်ခန်းထဲ ကို ပြန်လာခဲ့တယ်။အိပ်ခန်းထဲ မှာ သူမ က နိုးနေပြီ။ ၀တ်စုံပြည့် နီးပါးတောင်ပြန် ၀တ်ပြီးနေပြီ။“ရေမချိုးတော့ဘူးလား။”သူက မေးတော့ သူမခေါင်း ခါပြတယ်။ သူ (စိတ်ထဲကနေ) ထပ်ပြီးတော့ မျက်နှာကို မဲ့ရွဲ့ပစ် လိုက်တယ်။“ဒီည ရှုတင် အမီပြန် သွားရမယ်။ ရေချိုးနေရင် မမီတော့ ဘူး။ မိတ်ကပ် လည်း ပြင်ရဦးမယ်။”လို့ သူမပြန်ပြောရင်း သူသောက်မယ် လို့ ကြံရွယ် ထားတဲ့ ရေဗူး ကို ယူသောက်လိုက်တယ်။ “ဒီရေဗူး ကို သူပြန် သွားရင် ငါလွှင့်ပစ် လိုက်တော့မယ်။” လို့ သူတွေးလိုက်တယ်။“ရေချိုး ခန်းထဲ ၀င်သွားတာ ကြာလိုက်တာ။ ကျွန်မတောင် လိုက်လာဦး မလို့ပဲ။”သူ ဘာမှ မပြောလိုက်ဘူး။ ပြောစရာတွေ ရှိပေမယ်လို့ ဘာပြောရမယ်မှန်း မသိတာကြောင့် သူဘာမှ မပြောလိုက် ဘူး။ ဒါပေမယ်လို့ ပြောကို ပြောရမယ်။ ဟုတ်တယ်။သူမ မသွားခင် မှာ သူ့စိတ်ထဲ တော်တော်ကြာကြာ လိပ်ခဲ တည်းလည်း ဖြစ်နေတဲ့ ဒီကိစ္စကို ပြောကိုပြောရမယ်။“ဒီနေ့ ရှင့်ကြည့် ရတာတစ်မျိုးပဲ။ ညက ကျေနပ်မှု မရဘူးလား။”သူမ ဟာ လိင်မှုရေးရာ ကျွမ်းကျင် ပိုင်နိုင်တဲ့ မင်းသမီး တစ်ယောက်ပဲ။ သူမဟာ အပြင်မှာ လည်း အခကြေးငွေ ယူပြီး လိင်မှုရေးရာ ဖြည့်ဆည်းပေးနေတဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ သူကတော့ ခြွင်းချက်ပေ့ါ။ သူ့ကိုတော့ သူမ က တံခါး မရှိ ဓါး မရှိ အချိန်မရွေး ၀င်ထွက် သွား လာခွင့်ပေးထားတယ်။၀င်ထွက် သွားလာခွင့်ပေးထားတယ် လို့ ဆိုပေမယ်လို့ များသော အား ဖြင့်တော့ သူ ရှိရာကိုပဲ သူမ က အလာများ ပါတယ်။ ဒီလို အကျွမ်း တ၀င်ရှိနေတဲ့ အမျိုးသမီး တစ်ယောက်နဲ့အတူနေ ရတာ သူ့ဘက် က ဘာများ မကျေနပ်စရာ အကြောင်းရှိမှာလဲ။ သူခေါင်းခါပြ လိုက်တယ်။“ဒါဆို ဘာဖြစ်နေတာ လဲ။”သူမ က စိတ်မရှည် သလို မေးတယ်။အနားမှာ ရှိနေ တဲ့ စီးကရက် တစ်ဝက် ကို မီးညှိ လိုက်ရင်း သူ … သူမ ကို ကြည့် လိုက်တယ်။ သူမ က သူ့အကြည့် ကို ပြန်တုံ့ပြန်ရင်း တီဗွီထဲ မှာ သူပြုံးပြလေ့ရှိတဲ့၊ အပြင်က သူ့ရဲ့ လိင် အလုပ်ရှင်တွေ ကို ပြုံးပြလေ့ ရှိတဲ့ အပြုံးမျိုး ကို သူ့ကိုပြုံးပြတယ်။ သူမ ကိုကြည့်ရတာ ဒီအပြုံး တစ်မျိုးတည်း ပဲ ပြုံးတတ်ပုံပဲ။အပြုံး နဲ့တူတူ သူ့ အနားကို ပါ ရောက်လာတယ်။ သူ.. ကိုယ် ကို မသိမသာ ကျုံ့လိုက်ရင်း သူမ ကိုမေးလိုက်တယ်။“ဒီညနေ ရှူ တင် မသွား လို့ မရဘူးလား။ ကိုယ်ပြော စရာလေးရှိလို့။”သာမန် အချိန်တွေ ဆိုရင်တော့ သူ ဒီလိုပြောလိုက်ရင် ခေါင်းခါ မှာပဲ။ ဒါပေမယ်လို့ ဒီညမှာ သူမ ဘက်က သူ့င်္ဆီ က တစ်စုံတစ်ရာ ကို ထပ်မံမျှော်လင့်နေသေး ပုံ ရတာကြောင့် “ကောင်းပြီလေ” လို့ ပြန်ပြောရင်း သူ့ရဲ့ မန်နေဂျာ ကို သူ ဒီည မလာနိုင်တော့ကြောင်း ဖုန်းဆက်ပြောလိုက် တယ်။ငါးမိနစ်လောက် အခြေ အတင် ပြောကြပြီးနောက် မှာ သူဖုန်းချ လိုက်တယ်။ ဖုန်းချ လိုက်ပြီး “ဘာပြောမှာ လဲ။” လို့ သူ့ကို မေးတယ်။သူ ချောင်း တစ်ချက် ဟန့်လိုက်တယ်။“ကိုယ်တို့ ပတ်သက်နေတာ နှစ်လကျော်ပြီနော်။”ပြောလိုက်ပြီး မှ သူ့ကိုယ်သူ “ငါတော်တော် ညံ့တာပဲ” လို့တွေးလိုက် မိတယ်။ တကယ်ဆို ဒီထက် ပိုပေါက်ရောက် မယ့် စကားမျိုးကို ရွေးပြောသင့် တာပေါ့။ဥပမာ .. “ ငါတို့ ပတ်သက် မှု ရပ်လိုက်ရအောင်။” ဆိုတာမျိုးပေါ့။ ဒါမှ သူမဘက်က “ဘာဖြစ် လို့လဲ။ ” ဘာညာ မေးလာ မှာပေါ့။ ခုတော့ သူမက ပါးစပ်ကြီး ပိတ်ပြီး သူဆက်ပြောမှာ ကို စောင့်နေ တယ်။ (စောင့်နေပုံရတယ်။)“ဒီလိုလေ။ ခုပတ်သက်နေတာကို ကိုယ်ပြန်ပြီးတွေးကြည့်လိုက်မိတယ်။ တကယ်ဆို မင်းနဲ့ကိုယ် မတွေ့သင့်ဘူးလို့ ကိုယ်ထင်တယ်။ မင်းနဲ့မှ မဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ်ဘယ်အမျိုးသမီးနဲ့မှ မတွေ့သင့်ဘူးလို့ ထင်တယ်။ ထင်နေမိတယ်။ ဒီလိုပြောလို့ ကိုယ့်ကို ဂေးလို့ မထင်နဲ့နော်။ ကိုယ်ဂေးမဟုတ်တာ မင်းသိပါတယ်။ဒီတော့ .. ” သူ့ရဲ့ စကားလုံးတွေ ဟာ တောင်စဉ်ရေ မရဘူး။ ဒီလို သူလျှောက်ပြောနေ တာတွေ ကို သူမ က စီးကရက် တစ်လိပ် ကို လက်ကြားမှာ ညှပ်ရင်း ခပ်ပြုံးပြုံး အနေအထားနဲ့နားထောင်တယ်။ သူမ ကိုကြည့်ရတာ သူမ ဘ၀မှာ ဒီလို စကားလုံးတွေ က ကြားဖူးနေကျ စကားလုံးတွေဖြစ်မယ် ထင်တယ်။ သူမကို ကြည့်လိုက် ရင်း သူဘာ ဆက်ပြောရမလဲမသိတော့ တာကြောင့် တိတ်တိတ်လေး ပြန်နေလိုက်တယ်။
ဒီတော့ သူမ က ပြောလာတယ်။“ကျွန်မနဲ့ အဆက်အသွယ်ဖြတ်ချင်ပြီပေါ့။ ဒီလိုပေါ့။”သူ .. “ ဟုတ်တယ်။” လို့ ခပ်တိုးတိုးလေး(သာမန်ထက် တိုးတဲ့အသံနဲ့) ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။ သူမကိုတော့ မကြည့်ပါဘူး။ သူမကတော့ ကြည့်နေမယ်ဆိုတာသူသိနေတယ်။“ဘာကြောင့်လဲမေးရင် ရှင်ဖြေမှာလား။”ဖြေမယ်လို့ သူဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။“ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ မင်းက လက်ရှိအရမ်းနံမည်ကြီးနေတဲ့ ရုပ်ရှင်မင်းသမီးလေ။”“ဒီတော့ ဘာဖြစ်လဲ။”“ပြီးတော့ မင်းက လက်ရှိ အိမ်ထောင်ကြီးနဲ့လေ။”“ဒီတော့ရော ဘာဖြစ်လဲ။”သူမ ပြန်မေးတာတွေကြောင့် သူဘာပြန်ဖြေရမယ်မှန်းမသိတော့ဘူး။ သူမက ဆက်ပြောတယ်။“ ကျွန်မက လက်ရှိနံမည်ကျော် မင်းသမီးဖြစ်နေတော့ ဘာဖြစ်သလဲ။ ရှင့်အတွက် ဘာထိခိုက်သွားလို့လဲ။ လက်ရှိ ကျွန်မက အိမ်ထောင်ရှိနေတော့ရော ဘာဖြစ်လဲ။ရှင့်အတွက် ဘာထိခိုက်သွားလို့လဲ။”“ကိုယ် မင်းရဲ့ အမြှောင် လင်ငယ် ဘ၀နဲ့ မနေနိုင်တော့ဘူး။”“ဒါဆို ကျွန်မ ကို လက်ထပ်မလား။”“ဟင့်အင်။ ”“ကျွန်မ ထက် ပိုပြီးကျေနပ်စရာကောင်းတဲ့ လူတွေ့ထားတယ်လား။”“ကိုယ် ခုနက ပြောပြီးပြီလေ။ တခြား ဘယ်မိန်းမနဲ့မှ လည်း တွေ့ဖို့ မရှိတော့ပါဘူးလို့။”“ချက်ချင်းကြီး ဂေးသွား တာလား။”“ကိုယ်ခုနက အဲဒါကိုလည်း ပြောပြီးပြီလေ။”“ဒါဆို .. ” လို့ သူမစကားစ ပြီး ဆက်မပြောတော့ဘဲ ခေါင်းညိတ်တယ်။သူ .. သူမကို ကြည့်ပြီးဆက်ပြောလိုက်တယ်။“ကိုယ့်မှာ မင်းနဲ့တွေ့ခါစက ချစ်သူရှိတယ်။ မင်းသိတယ်နော်။”သူမ ခေါင်းညိတ်တယ်။“အဲဒီ ချစ်သူနဲ့ ပြန်တွဲချင်လို့လား။”“ကိုယ်ပြောတာ ဆုံးအောင် နားထောင်ပါ။”သူက သူစကားပြောနေတုန်း ဖြတ်ပြော တာ မကြိုက်ဘူး။ သူကိုယ်တိုင် ကတော့ ဖြတ်ဖြတ်ပြော တတ် တဲ့ အကျင့် ရှိတယ်။ ဒါပေမယ် လို့ သူစကားပြောနေတုန်းသူများဖြတ်ပြောရင် မကြိုက်ဘူး။ သူပြောတာကို ဆုံးအောင်နားထောင်ပြီး မှ ပြောချင်ရာ ကို ပြော ဖို့ သူမကို သတိပေးရတာ လည်း ဒီအခေါက် နဲ့ဆို အခေါက်လေး ရာကျော်ပြီ ထင်တာပဲ။လှတဲ့ မိန်းမတွေ (လှအောင် ပြင်ဆင်နေတတ်တဲ့ မိန်းမတွေ) အတော် များများ ဒီလိုပဲ ဒုံးဝေးကြ သလားလို့တောင် သူတွေးမိတဲ့ အထိပဲ။“မင်းမှာ လည်း အိမ်ထောင် ရှိတယ်။ ဒါနဲ့ လည်း ကိုယ်တို့ အတူနေခဲ့ကြ တယ်နော်။”သူမ ခေါင်းလည်း မညိတ်၊ ခေါင်း လည်း မခါဘူး။ သူ့ကိုပဲ စိုက်ကြည့်နေတယ်။သူ့ ရင်ထဲမှာ ဖြစ်နေတဲ့ လိပ်ခဲ တည်းလည်း ကိစ္စ ကို သူအခုပြောလိုက်တယ်။“မင်းက စိတ်ကျေနပ်ဖို့ကောင်းတဲ့ မိန်းမ တစ်ယောက်ပါ။ ပြီးတော့ နိုင်ငံကျော် ရုပ်ရှင် မင်းသမီး တစ်ယောက်။ မင်းနဲ့ တွဲသွား တွဲလာ လုပ်ရတာ အင်မတန် သာယာဖို့ကောင်း ပါတယ်။ လူတိုင်း က ကိုယ့်ကို အားကျတဲ့ အကြည့်တွေနဲ့ ၀ိုင်းကြည့်ကြ တာကိုလည်း ကိုယ်သာယာ ပါတယ်။ ကိုယ်တွဲခဲ့ ဖူးတဲ့ ချစ်သူက မင်းလို ဘာမှ မပြည့်စုံတာ လည်း အမှန်ပဲ။ ”သူမ ပြုံးတယ်။ ကိုယ့်ကို ကိုယ် ဂုဏ်ယူ ၀င့်ကြွားစွာ ပြုံးတဲ့အပြုံးမျိုး။ မိန်းမတွေ ပဲ ပြုံး တတ်လေ့ ရှိတဲ့ အပြုံးမျိုး ။ အင်း . ဒီလိုပြောရတာ နည်းနည်းတော့ ကသိ ကအောက်နိုင်(သလိုရှိ) တယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ မိန်းမပြုံးတဲ့ အပြုံး ဆိုမှတော့မိန်းမတွေ ပဲ ပြုံးတတ်မှာပေါ့။ ယောကျာ်းတွေပြုံးတဲ့အပြုံးမျိုးလည်း ယောက်ျားတွေပဲ ပြုံးတတ်မှာပဲ။ ဒါမဆန်းဘူး။ ခုနက သူ ပြောလိုက်တဲ့ စကားဟာ သူ့စိတ်ထဲကတကယ်ပါလို့ ပြောလိုက်တာ တစ်ဝက်ကျော်ကျော်ပဲပါတယ်။ ကျန်တာက ညာတာပေါ့။ဥပမာပြောရမယ် ဆိုရင် “ကိုယ့်ချစ်သူ က မင်းလို မပြည့်စုံ ဘူး။” ဆိုတာပေါ့။ ဒါ.. မှားတယ်။မှားပြောလိုက် တယ် ဆိုတာကိုလည်း သူ့ကိုယ်သူ သိနေတယ်။ သူတွဲ ခဲ့ဖူးတဲ့ ချစ်သူက သာမန်ပြည်သူတွေ ထဲက မိန်းကလေး တစ်ယောက် ပဲ ဆိုတာတော့ မှန်ပါတယ်။ဒါပေမယ် လို့ သူမလောက် ဒုံးမဝေးဘူး။ သူမလောက်လည်း မလှဘူး။ အဲ … သူမလောက် လည်း အချစ်ရေးရာ မှာ မကျွမ်းကျင်ဘူး။
သူမကို ဒုံးဝေး တယ်လို့သွားပြော လိုက်ရင် သူနောက်ထပ် ထပ်ပြော မယ့် စကားတွေကို နား မထောင်တော့ ဘဲ သူမ ထ ထွက်သွားမှာ ကို စိုးတာကြောင့် အရင် ဆုံးမြှောက် ပင့်ပြော လိုက် တယ်။ (နောက်မှ ရိုက်ချမယ် ဆိုတဲ့ သဘောနဲ့ပေါ့။ သူ အရင်တွဲဖူး တဲ့ မိန်းကလေး ဆို ရင်တော့ သူ အခုလို စကားလမ်းကြောင်းနေပြီ ဆိုရင် ဘာဆက်ပြောတော့မယ် ဆိုတာကို ရိပ်မိ မှာပဲ။ ဒါပေမယ် လို့ သူမ ကတော့ ခုနကပြောပြီးတဲ့ အတိုင်း ဒုံးဝေးတဲ့ အတွက် သူဘာ ဆက်ပြော မယ်ဆိုတာကို ရိပ်မိပုံ မရဘူး။ ရိပ်မိ ချင် လည်း ရိပ်မိ မှာပေါ့လေ။မသိ ချင်ယောင်ဆောင်နေတာ လည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့။)“မင်းနဲ့ တူတူ အိပ်ရတဲ့ အခေါက်တိုင်း လည်း ကိုယ် အမြဲတမ်းပျော်ရွှင် သာယာ ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ် လို့ ကိုယ်တို့ တွေ မှားနေတယ်လို့ အမြဲ ခံစားနေရတယ်။ မင်းနဲ့ စတွေ့ကတည်း ကပဲ။”“ဒါဆို ဘာလို့ ကျွန်မနဲ့ ဆက်အိပ် ခဲ့သေးလဲ။”“မင်းကို ကိုယ် သဘော ကျလို့ပေါ့။ဒါပေမယ်လို့ သဘောကျတယ် ဆိုတာလေး တစ်ခုတည်း နဲ့တော့ မင်းနဲ့ ကိုယ် ဆက်တွဲနေဖို့ မသင့်ဘူးလေ။ မင်း အားမနာပေမယ် လို့ မင်းအိမ်ထောင် ကို ကိုယ်အားနာလာပြီ။ ပြီးတော့ မင်းကို သဘော ကျတယ် ဆိုတာက မကြာခင် မှာ မင်းလည်း အသက်တွေကြီး လာတော့ မှာပဲလေ။ အသက်ကြီးလာပြီ ဆိုရင် ခုလောက်တော့ စိတ်ကျေနပ် ဖို့ မကောင်းတော့မှာ အမှန်ပဲ။အမှန်ပြောရရင် မင်းကို ကိုယ် သဘော ကျတာ မင်းရဲ့ အသက် အရွယ် အရ မင်းရဲ့ကျွမ်းကျင် ပိုင်နိုင်မှုတွေ ကို သဘော ကျတာ။ ဒီထက် မင်း အရွယ်ရင့် သွားရင် မင်း ဒီလိုတွေ မစွမ်းဆောင်နိုင်တော့ ရင် မင်းကို ကိုယ်သဘောကျတော့ မှာ မဟုတ်ဘူး။ မင်းနဲ့ မတွေ့ခင် တုန်း က ကိုယ် က လူ့ကျင့် ၀တ်တွေ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း ဆိုတာတွေကို လုံးဝ တသဝေ မတိမ်း လိုက်နာ ခဲ့တဲ့လူပါ။
မင်းနဲ့တွေ့ မှ ကိုယ် ဘယ်လိုဖောက်ပြန် သွားတယ် ဆိုတာကို ကိုယ့် ကို က်ိုယ်တောင် မယုံနိုင်လောက်အောင် ပဲ။ ဒါပေမယ်လို့ မင်းနဲ့ အိပ်ပြီး တိုင်း ကိုယ် အတွေးဝင်တယ်။ ခဏတာလောက် သာယာဖို့အတွက်နဲ့ ကိုယ်တို့တွေ လူ့အဖွဲ့အစည်းကြီး ကို ဖောက်ပြန်နေ မိကြပြီလို့။ ကိုယ်တွေး မိတိုင်း အပြစ် ရှိသလို ခံစားရတယ်။ ပြီးတော့ မင်းအိမ်ထောင် အပေါ်မှာ အားနာတယ်။ ”စကားတွေ အများကြီးပြောပြီးတော့ သူ .. မောသွားတယ်။ အနားမှာ ရှိနေတဲ့ ရေဗူး ကို ကောက်မော့ လိုက်တယ်။ ရေတွေ ပါးစပ် ထဲရောက်ပြီးသွား ကာမှ သတိရ လိုက်တယ် ။ ဒီရေဗူး ကို သူမ ခုနက ပါးစပ် မဆေး ဘဲ သောက်ထားတယ်။ သူ .. သူမ ပြန်သွားရင် လွှင့်ပစ် လိုက်တော့မယ် လို့ ကြံရွယ် ထားတဲ့ ရေဗူး။ခု သူ မေ့ပြီးသောက်လိုက် မိပြီ။ ရွံတာ လား မသတီ တာလား မသိတဲ့ ခံစားချက် တစ်ခုက သူ့ဗိုက်ထဲ ကနေ မောက်တက် လာတယ်။ သူမရှေ့မှာ ဆိုတော့လည်း ရေကို ပြန်ထွေးထုတ် လိုက်ဖို့က အားနာနေတယ်။ သူ .. ရေကို ပါးစပ် ထဲ ငုံထားပြီး ရေချိုးခန်း ထဲ ၀င် လိုက်တယ်။ဘေဇင် ထဲကို သူငုံထာ; တဲ့ရေတွေ ထွေးထုတ် ပစ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ပြန်ထွက် လာလိုက် တယ် ။ သူမကတော့ ခုနကနေရာ မှာ ခုနက ပုံစံအတိုင်းပဲ။ သူ့ကို တစ်ခုခုပြော ဖို့ စောင့်နေ တာဖြစ် မယ် (လို့ သူထင် တဲ့ အတွက် သူမနား ကို သွားလိုက်တယ်။)။“ကျွန်မ အိမ်ထောင် ကို ရှင်အားနာတယ် ။ ဟုတ်လား။”သူ ခေါင်းညိတ် လိုက်တယ်။ သူမ က ခေါင်းခါတယ်။“ဒါဆို ကျွန်မ နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လူ မှန်သမျှ ကျွန်မအိမ်ထောင် ကို အားနာနေရတော့ မှာပဲ။”သူမ က ရယ်သွမ်းသွေး သလို ပြောတယ်။ သူဒေါသ ထွက်သွားတယ်။ သူက သူ့ကို တခြား လူတွေ နဲ့ နှိုင်းနှိုင်းပြီး မြင်တာမျိုး မကြိုက်ဘူး။ (တကယ်တော့ သူ ဟာလည်း တခြား လူတွေနဲ့ ဘာမှ မထူးခြား တဲ့ လူတစ်ယောက် ပါပဲ။) သူ ပြောလိုက်တယ်။“တခြား လူတွေနဲ့ ကိုယ့် ကို မနှိုင်းနဲ့လေ။ ကိုယ်က ကိုယ်ပဲ။” သူမရယ်တယ်။“ကျွန်မ မှာ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အလုပ်နှစ်ခု ရှိတယ်။ တစ်ခု က ဗွီဒီယို ကင်မရာတွေ အရှေ့ မှာ သရုပ်ဆောင် တာ။ နောက်တစ်ခု က ကျွန်မ ဘက်က ကုန်ပစ္စည်းပေးပြီးသူတို့ က ငွေကြေးပေးတာ။ဒီနှစ်ခုလုံး က ကျွန်မ အတွက် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဖြစ်နေတဲ့ အတွက် နှစ်ခုလုံး ကို ကျွန်မရှောင် လို့မရဘူး။ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ဆိုတဲ့ စကားကို ရှင်နားလည် ရဲ့လား။ နားမလည် လည်း နားလည် ချင်ယောင် ဆောင်လိုက်ပါ။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ကျွန်မ မရှင်း ပြတတ် လို့ပဲ။ကျွန်မ အသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်အောင် အတွက် ကျွန်မ ရထားတဲ့ အိမ်ထောင် က ဘာမှ အသုံး မ၀င်ဘူး။ ဒီတော့ ကျွန်မ ၀မ်းစာ ကျွန်မ ရှာတယ်။ ဒီ အလုပ်ကို လုပ်နေတဲ့ အချိန်မှာ င့ါကိုဘယ်သူတွေ ဘယ်လိုမြင်နေမလဲ ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုး ကို ကျွန်မ မတွေးဘူး။ဘယ်သူတွေ ဘယ်လိုမြင်မြင် ဒါ ကျွန်မ ရဲ့ အလုပ်ပဲ လို့ ကျွန်မ ခံယူထားတဲ့ အတွက် ဒီအလုပ်ကို စိတ်ရှင်းရှင်းနဲ့ ကျွန်မ လုပ်နိုင်တယ်။ ကျွန်မ အိမ်ထောင် အတွက် ရှင် အား နာနေတာ ဆိုရင်တော့ ဒီ အတွက်နဲ့ ပူ စရာ ဘာမှ မလိုဘူး လို့ ကျွန်မပြောပါရစေ။”“ဒါပေမယ် လို့ မင်း အခုပြောနေတဲ့ လူတွေက မင်းကို အခကြေးငွေပေးနေတဲ့ လူတွေလေ။ ကိုယ်က မင်းကို အခ ကြေးငွေပေးနေတဲ့လူ မှ မဟုတ်ဘဲ။ ပြောရမယ် ဆိုရင် သူများ မယား ကြာခိုနေရုံ သက်သက် လူပဲ။ ပိုက်ဆံလည်း ပေးတာ မဟုတ်ဘူး။ တစ်ခါ တစ်လေများ ဆိုရင် မင်း ကတောင် ညစာ ၀ယ်ကျွေးရသေးတယ် မဟုတ်လား။ကိုယ်ဟာ သူများ ဆောက် ပြီးသား အိမ်ထဲ ပဲ ၀င်ဝင်နေတတ် တဲ့ … အဲ .. အဲ .. ”“၀င်ကစွပ် ။”“အင်း အင်း .. ၀င်ကစွပ် လို အကောင် မျိုးပဲ။ ”သူမ ရယ်တယ်။“ရှင့်ကိုယ် ရှင် ဒီလောက် ထိ အထင်သေးနေလိမ့်မယ် လို့ ကျွန်မ မထင် ထားဖူးဘူး။”သူမ စကားက သူ့ကို ကသိ ကအောက် ဖြစ်သွားစေတယ်။ သူ စကားပြောလိုက်တယ်။သူ စကားပြော ဖို့ ပါးစပ်ကို ဟလိုက်ပေမယ် လို့ သူမ က လက်ကာပြတဲ့ အတွက် သူ စကားပြော ဖို့ပါးစပ် ကို ပြန်ပိတ်လိုက်တယ်။“ကျွန်မ အတွက်တော့ ဘာမှ မထူးခြားဘူး။ ဒီမှာ .. စဉ်းစားကြည့်စမ်းပါ။ ကျွန်မ က နှစ်ဆယ့်လေး နာရီ အပြည့် လုံးလုံး အသက်မွေး ၀မ်းကြောင်း အလုပ်တွေ အတွက်ပဲရုန်းကန်နေရတော့ မှာလား။ ကျွန်မ အတွက် ပျော်ရွှင် ဖို့ အချိန် ဆိုတာလေး မရှိသင့်တော့ ဘူးလား။”“ကိုယ်နဲ့နေရတာ မင်းပျော်လို့ လား။ ကိုယ် က မင်းတွေ့ဖူး တဲ့ ယောကျာ်းတွေ လို မင်း ကို ပျော်ရွှင် မှု အပြည့် အ၀ ပေးနိုင်တဲ့ လူမျိုး မို့လို့လား။ ပြီးတော့ မင်းပျော် ချင်ရင်မင်း ကိုယ် ပိုင် အိမ်ထောင်ကြီး ရှိတာပဲ။ သူနဲ့ ပျော်လို့လည်း မင်းကို သူက ပိုက်ဆံပေးမှာ မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်လို ပဲပေါ့။ ဘာထူးခြားလို့လဲ။ ”“သူနဲ့လည်း ကျွန်မ တခါတလေပျော်ပါတယ်။”သူ .. ဘာဆက်ပြောရမလဲကို မသိတော့ဘူး။ ဒီမိန်းမ အတော်တော့ ပြောရဆိုရခက်တယ်။ တကယ်တမ်းတွေး ကြည့်ရင် သူဆိုတာက ပညာတွေတသီကြီးတတ်တဲ့လူလည်း မဟုတ်ဘူး။ ရုပ်ချော သဘောမနောကောင်း အလုပ်ကြိုးစား တဲ့လူမျိုးလည်း မဟုတ်ဘူး။ တစ်နှစ်ဝင်ငွေဘယ်လောက်ဆိုတာမျိုးအတိအကျရှိတဲ့ကောင်မျိုးလည်း မဟုတ်ဘူး။“ရှင် ကျွန်မ ကို လက်ထပ် မလား။”“ဟင့်အင် ။ ” လို့ သူမြန်မြန် ဆန်ဆန် ပဲ ဖြေလိုက်တယ်။ သူမ ပြုံးတယ်။“ဟုတ်တယ်လေ။ ရှင်နဲ့ ကျွန်မကြား မှာ လက်ထပ်တယ် ဆိုတာ လိုမှ မလိုဘဲ။ ခုလည်း တူတူနေနေ ရတာပဲ။ လက်ထပ် လိုက်ရင် လည်း တူတူနေရ မှာပဲ။ ဘာထူး သွားလို့လဲ။”“ဘာပဲပြောပြော မင်းကို ကိုယ် ပတ်သက်နေ ရတာ လူ့အဖွဲ့အစည်းကြီး ထဲမှာ စည်းပျက်နေ သလိုဖြစ်နေတယ် လို့ ခံစားနေရတယ်။ ဒီလို ခံစားနေရတဲ့ အတွက် ကိုယ့်မှာ အချိန်တိုင်းလို အပြစ်ဖြစ်နေတယ်။ ကိုယ် ဒီလို မခံစားချင်တော့ဘူး။ ကိုယ်တို့ ထပ် မအိပ်ရအောင်။”“ရှင်ပြောတဲ့ လူ့အဖွဲ့ အစည်းကြီး ဆိုတာ ဘယ်ဟာ ကိုပြောတာလဲ။ လူ့အဖွဲ့အစည်းကြီး ထဲမှာ နေမယ် ဆိုရင် ဒီ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းတွေ ကို လိုက်နာပါ .. လို့ ဘယ်သူ က စ ပြော ခဲ့တာလဲ။ ရှင်ပြော တဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းကြီး ထဲက လူ ဘယ်နှယောက်လောက် က ရှင်ပြော သလို အဲဒီ စည်းကမ်းတွေကို လိုက်နာနေတယ် လို့ ရှင်ထင်လို့လဲ။”ပြောရင်း ပြောရင်း သူမ ဒေါသ ထွက်လာ သလိုပဲ။ အသံကျယ် လာသလို စကားပြော လည်း မြန် လာတယ်။ သူမ မေးခွန်းတွေ ကို သူ့ကိုယ် သူ ပြန်မေးလိုက် မိတယ်။ သူ ..မဖြေ တတ်ဘူး။ ဘာတွေ မေးမှန်းလည်း မသိဘူး။ တကယ်ဆို လူဆိုတာက လူ့ကျင့်ဝတ် နဲ့တော့ အညီနေထိုင် ရမယ် (သင့်တယ်) မဟုတ်လား။“ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မင်းနဲ့ နေရတာ ကိုယ်ကျောမလုံဘူး။”“ကျွန်မ ကတော့ လုံတယ်။”
သူမ ကိုကြည့်လိုက်တော့ သူမက သူ့ကို မျက်လုံးပြင်းပြင်းတွေ နဲ့ ပြန်ကြည့်နေတာ ကို တွေ့ရ တယ်။ သူ ဘာမှ ဆက်မပြောဘဲ သူမကို ပြန်ကြည့်နေလိုက်တယ်။ သူမ က ဆက်ပြောတယ်။“ရှင့် ကို ဒီလောက် ထိ သူရဲဘောကြောင်လိမ့်မယ် လို့ ကျွန်မ ထင်မထားဘူး။ ကျွန်မကတောင် ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး လို့ ဒီလောက်ပြောနေတာ။ ရှင်က ဘာဖြစ်နေတာလဲ။
ကျွန်မနဲ့ နေရတာ ရှင်ဘာ များ နာကျင် ထိခိုက်သွားရ လို့လဲ။ကျွန်မ ရှင့် ကို ဘာလုပ်ပေးပါ၊ ညာလုပ်ပေးပါ လည်း ပူဆာနေတာ မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်မ မောပန်း လာတဲ့ အချိန်တွေ မှာ ရှင်နဲ့ အ်ိပ်ချင်တယ်။ ဒါမှ မဟုတ် ညလုံးပေါက် ရှင်နဲ့စကားပြောနေမယ်။ ပြောချင် ပြောနေမယ်ပေ့ါ ကျွန်မ ဆိုလိုတာက..။ ဒါမှ မဟုတ် ရှင်နဲ့ ရုပ်ရှင် ထွက်ကြည့်မယ်။ လျှောက်လည် ကြမယ်။ ညလုံးပေါက် ကားလျှောက်မောင်းမယ်။”“မင်းအိမ်ထောင် နဲ့ ဒါတွေလုပ် လို့ရသားပဲ။”“သူ မအားဘူး။”သူ ပြောပြောပြီးပြီး ချင်း သူမ က ဆက်ပြောလိုက်တာဖြစ်တဲ့ အတွက် ရုတ်တရက် သူမ ဘာပြော လိုက်တယ် ဆိုတာ ကိုတောင် သူ မသိလိုက်ဘူး။ နောက်နည်းနည်းနေ မှ(သူ မအားဘူး) လို့ ပြောလိုက်တာပဲ လို့ နားလည်လိုက်တယ်။ မအားရအောင် ဘာလုပ်နေ လို့လဲလို့တော့ သူ မမေးလိုက် ပါဘူး။ သူ့အိမ်ထောင် က သူ့အလုပ်နဲ့ သူ သိပ်ရှုပ်တယ် ဆိုတာ သူသိ ထားတယ်။“ဒီမယ် .. ကျွန်မ တို့က လူမှုရေးဖောက်ပြန်နေတယ် လို့ ရှင်မတွေး ဘဲ တစ်ဆိတ်လောက် ကျွန်မတွေးသလို တွေး ကြည့်စမ်းပါ။ဒါဆို ရှင် ကျွန်မ ရင်ထဲမှာ ဘာတွေဖြစ်နေတယ် ဘယ်လို ခံစားနေရတယ် ဆိုတာကို ရှင် သိသွားလိမ့်မယ်။ ဘာလဲ … ကျွန်မ တို့က လူတွေဖြစ်နေတဲ့ အတွက် လူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီး ထဲမှာ လူတွေ သတ်မှတ်ထား တဲ့ စည်းကမ်းတွေကို မလိုက်နာ ဘဲ နေလို့ မရဘူး လို့ ရှင်ဆိုလို ချင်တာလား။
“နိုး .. ။ လူသေတွေ ရဲ့ စကားကို ကျွန်မ လက်မခံဘူး။ သူတို့ စကားတွေဟာ သူတို့ခေတ်မှာ မှန်ချင် မှန်ခဲ့လိမ့် မယ်။ ခုခေတ် မှာ လူတိုင်း အတွက် သူတို့ စကားတွေဟာမမှန်နိုင်တော့ ဘုး။ ဆိုလိုချင် တာက ဒိတ်အောက်နေပြီ။”ဒီ မိန်းမ အတော်တော့ပြောရ ခက်တယ်။ ပြောရ ခက်ပေမယ်လို့ သူမပြောတော့ဘူး။ အခုဆွေးနွေးနေ တဲ့ ခေါင်းစဉ် ကလည်း ဘုရား သခင် ယုံကြည်ရေး မယုံကြည်ရေးမဲခွဲနေ တာ မဟုတ်ဘူး။ သူ ပြောလိုက်တယ်။“မင်းနဲ့ ကိုယ် နဲ့ကတော့ အတွေးအခေါ်မှာ အတော် ကပြောင်းတိ ကပြောင်းပြန်ဖြစ်နေ တာပဲ။ ကိုယ် တို့ ဆက်ညှိ လို့လည်း ရမှာမဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်ဘက် ကတော့ ရှင်းတယ် ။ မင်း စီးပွားရေး အရ ကုန်ပစ္စည်း နဲ့ ငွေကြေး လဲလှယ်တာ ကို မပြောဘူး။ ဒါပေမယ်လို့ မင်း အိမ်ထောင်အပေါ် မှာ အပြစ် ရှိသလို ခံစားရတဲ့ အတွက် မင်းနဲ့မပတ်သက်နိုင်တော့ ဘူး။”သူမ က တစ်ခုခု ကို သဘောကျ သလို ပြုံးတယ်။ ပြီးတော့ ရယ်တယ်။
အတော် မှ အတော် ကို ခက်တဲ့ အမျိုးသမီး နဲ့ ထိပ်တိုက်ကြီး သူလာတွေ့နေတာပဲ။ သူ .. မျက်နှာကြက် ကို မော့ကြည့်ပြီး လေပြင်း တစ်ချက် မှုတ်ထုတ် လိုက်တယ်။
မျက်နှာကြက် မှာ တိမ်ပုံလေးတွေ ဆွဲထားပြီး တိမ် မရှိတဲ့ တခြားနေရာတွေ ကိုတော့ ကြက်သွေးရောင် ရယ် မိုးပြာရောင် ရယ် ခြယ်ထားတယ်။ ကြယ်ကလေးတွေလည်း ပါတယ်။
သူတို့ အိပ်ယာ နဲ့ တည့်တည့်ကြီး မှာ မှန် အကြီးကြီးတစ်ချပ် ကပ်ထားပေးတယ်။သူတို့ အတူ အိပ်ကြတဲ့ အချိန် တုန်းက ဒီမှန်ကြီး ကို သူ သတိ မထားမိဘူး။ ခု မော့လိုက်မှ
ပထမဆုံး မြင်မိတာပဲ။ မဆိုးဘူး လို့ သူတွေးလိုက်တယ်။ တစ်ချက်လောက်တော့ သူ မျက်နှာ ကြက် အပြင် အဆင်ကို ငေးနေမိသေးတယ်။ ဒါပေမယ်လို့ ငါ စကားပြောရဦးမှာ ပဲလို့ တွေးလိုက်မိ တဲ့ အတွက် သူ ခေါင်းပြန် ငုံ့ပြီး သူမ ကိုကြည့်လိုက်တယ်။“ကိုယ်တို့ လက်ထပ်ကြ မလား။ ခု လက်ရှိ မင်း အိမ်ထောင်ကို ကွာလိုက်။ ဒါဆို အလုပ်ဖြစ်ပြီ။”
သူမ ခေါင်းခါတယ်။“ကျွန်မ လိုချင်တာ ပျော်ဖို့သက်သက်ပဲ။ ပျော်ဖို့ သက်သက် တစ်ခုတည်း နဲ့တော့ ဘာကိစ္စနဲ့ ကျွန်မ အိမ်ထောင် ကို ကွာရမှာ တဲ့လဲ။ ကျွန်မ အိမ်ထောင်က ကျွန်မကို ချစ်တယ် ။ ရှင် ကျွန်မ ကို ဒီလိုချစ်နိုင် မှာ မို့လို့လား။” သေချာ တာပေါ့။ သူ ဘယ်ချစ်နိုင်မလဲ။
သူမ ဒေါသ နဲ့ ကုတင်ပေါ်ကနေ ၀ုန်း ကနဲ ခုန်ထ လိုက်တယ်။ ရုတ်တရက် ခုန်ထလိုက် တာကြောင့် သူမပေါင်ပေါ် မှာ တင်ထားတဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်ကြမ်းပြင်ပေါ် ပြုတ် ကျသွား တယ်။ (သူမ ကတော့ သူမ ရဲ့  ဒေါသ ကိုပဲ သတိပြုနေတဲ့ အတွက် ပိုက်ဆံအိတ် ကျသွားတဲ့ အပေါ်မှာသတိပြု မိဟန် မရှိပါဘူး။) ဒေါသထွက်နေ တဲ့ သူမ ဟာ ကုတင်ပေါ်ထိုင်နေ တဲ့ သူ့ကို ငုံ့ကြည့်နေတယ်။ သူ ဘာမှ မပြော လိုက်ဘူး။ သူမ ကိုပဲ ပြန်ကြည့်နေလိုက်တယ်။ သူမ သက်ပြင်းချတယ်။ ဒေါသတွေနဲ့ပေါ့။“ဒီအကြောင်း ကိုပဲ ခဏခဏ ဆွေးနွေးနေရတာ ပင်ပန်းပြီ လို့ ရှင် မထင်ဘူးလား။ ကျွန်မ လိုချင်တာ ကို ရှင့်ကို ပြောပြီးပြီ။ ရှင် လည်း ရှင် လိုချင်တာကို ကျွန်မကို ပြောပြီးပြီ။ ပြီးတော့ လည်း ကျွန်မ တို့ ထပ်တွေ့နေကြတာပဲ။ ဒီအပတ်ထဲ မှာတင် ဒီအကြောင်း ကို ရှင်နဲ့ ကျွန်မ ဆွေးနွေးကြတာ ခြောက်ခေါက် ရှိနေပြီ။ ရှင် ဘာလို့ ဒီအကြောင်းကို ပဲ ခဏခဏ ထပ်ထပ်ပြောချင်နေရ တာလဲ။ ရှင် ရူးနေတာ လား။ ကျွန်မ မောလှပြီ။”သူ မရူးဘူးလို့ စိတ်ထဲ က ပြောလိုက်တယ်။ ဘာလို့ ရူးရမှာလဲ။ ဒီ အပတ်ထဲမှာ သူမနဲ့ ဘာ အကြောင်းမှ ကို မဆွေးနွေး ရသေးဘူး။ သူမ နဲ့ ဒီအပတ် ထဲ တွေ့တာလည်း ဒါပထမဆုံး ပဲ။ ရူးချင် ရူး သူမ ရူးနေတာလို့ သူ သတ်မှတ်လိုက် တယ်။ ဘာဆက်ပြောရမယ် ဆိုတာကိုလည်း သူမသိတော့ဘူး။ တွေးလည်း မတွေးတော့ဘူး။ မတွေးလည်း မတွေးချင်တော့ဘူး။
အခန်း ဟာ နေကျ သွားပေမယ်လို့ အပူဒဏ် ကျန်ခဲ့တာကြောင့် မတရား ပူလောင်နေတယ်။ သူ့ရှေ့မှာ ရပ်နေတဲ့ သူမကြောင့် ပိုပြီး ပူနေတယ်(လို့ ခံစားရတယ်။) ။ သူ .. သူမကို တစ်ချက်ကြည့်ပြီး ခေါင်းငုံ့လိုက်တယ်။မတ်တပ် အနေအထားနဲ့ သူမ ခဏရပ်နေပြီး ခဏနေတော့ သူ့နား မှာ ဖွဖွ ရရ လာထိုင် တယ် ။ သူ့ရဲ့ ဆံပင်တွေ ကို တယုတယ ပွတ်သပ်တယ်။ သူ့ရဲ့ နှုတ်ခမ်းနဲ့လည်ကုပ် ကိုရောပဲ။ပြီးတော့ သူ့နား အနား ကို ကပ်ပြီး သူမတိုးတိုးလေး ပြောတယ်။“ရှင် ဒီနေ့ ဆေးသောက်ပြီးပြီလားဟင်။”သူ ဆေးသောက် ဖို့ မလိုတော့ဘူး ဆိုတဲ့ အကြောင်း သူမ ကို မပြောလိုက်ဘူး။ နောက် တစ်ခါ ဆို ဒီလို အယူအဆ မတူ တဲ့ မိန်းမမျိုးတွေ နဲ့ ထပ်ပြီး မပတ်သက်တော့ ဖို့ သူဆုံးဖြတ် လိုက် တယ်။ သူ့ဟာ သူ မင်းသမီး မကလို့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်။သူ ငြိမ်နေတာ ကို သူမ ခဏလောက်ကြည့်ပြီး ကြမ်းပြင်ပေါ် မှာ ကျနေတဲ့ သူမရဲ့ အိတ် ကို ပြန်ကောက် ယူလိုက် တယ်။ (ကြည့်ရတာ ပြန်တော့မယ့် ပုံပဲ။) ပြီးတော့ သူ့နား မှာ လာပြန် ထိုင်တယ် “ရှင် ဒီည နားဖို့ လိုအပ်နေတဲ့ ပုံပဲ။ နားလိုက်တော့နော်။ မနက်ဖြန် ည ဒီမှာပဲ ထပ်တွေ့ ကြသေး တာပေါ့။”
သူ တဈရေးနိုးလာတော့ အိပျယာဟာ တအားပူနပွေီ။ နာရီက ညနလေေးနာရီ နှဈဆယျ့ရှဈ ကို ပွနပွေီ။ အပွငျ မှာ နကေ မကသြေးဘူး။ ဒီနိုငျငံမှာ နှရောသီ ဟာ သမေတတျ ပူတယျ။ ပူလှနျး အားကွီး လှနျးလို့ တဈကောငျခှဲ အားရှိတဲ့ အဲကှနျး ဟာ သူတို့နှဈယောကျ အိပျနတေဲ့ အခနျးသေးသေးလေး ကိုပဲ မအေး မအေးနိုငျဘူး။အိပျယာ ရဲ့ ဘေးအစှနျး မှာ တငျလှဲ ထိုငျရငျး ညက ခြှတျထား ခဲ့တဲ့ စတိုငျပဲနျ နဲ့ အတှငျးခံ ကို ပွနျဝတျ လိုကျတယျ။ ဝတျရငျး နဲ့ ဘေးနားမှာ အိပျမောကနြဆေဲဖွဈတဲ့ သူ့ရဲ့ အဖျော ကို သူကွညျ့လိုကျတယျ။ တကယျတမျး သခြောကွညျ့မယျ ဆိုရငျ သူ့ရဲ့ ည အိပျဖျောဟာ တီဗှီထဲ မှာပဲ ကွညျ့ကောငျး တဲ့ ရှကျကွမျးရကြေို မိတျကပျဖုံး အမြိုးသမီး တဈယောကျသာ ဖွဈတယျ။ဒါပမေယျ့ လိငျဆကျဆံမှု မှာ တကယျတမျး က ရုပျရညျ ဟာ အဓိက မကဘြူးလို့ သူထငျတာ ပဲ။ သခြောကွညျ့ လိုကျတော့ သူမက အိပျမော အကလြှနျနရော က ပါးစပျက သားရတှေေ ပါ ထှကျကနြတော ကို တှရေ့တယျ။ သူ .. မကျြနှာ ကို တဈခကျြ မဲ့လိုကျပွီး ရခြေိုးခနျးထဲ ကို ဝငျ လိုကျတယျ။ ရခြေိုးခနျးထဲ ကို ဝငျလိုကျတယျ ဆိုတာက ရခြေိုးခငျြ အိမျသာတကျခငျြ လို့ရယျ လို့တော့ မဟုတျဘူး။သူ့ရဲ့ ညအိပျဖျော ပါးစပျ က ထှကျကနြတေဲ့ သားရတှေေ ကို ရှံရှာ လာတဲ့ အတှကျကွောငျ့ပဲ။ရခြေိုးခနျး ထဲမှာ ဘာလုပျရမယျမှနျး မသိတာကွောငျ့ အိမျသာ အိုးပျေါ မှာ ဘောငျးဘီ မခြှတျ ဘဲ သူ.. နာရီဝကျ လောကျထိုငျနဖွေဈလိုကျတယျ။ ဒါမှမဟုတျ နာရီဝကျလောကျ ထိုငျနဖွေဈ လိုကျတယျလို့ စိတျကူးပဈလိုကျတယျ။အိမျသာ အိုးပျေါမှာ ဘာမှ မလုပျဘဲ နာရီဝကျလောကျ ထိုငျနေ လိုကျတာက သားရတှေေ ထှကျကအြောငျ ပိုးစိုး ပကျစကျ အိပျပြျောနတေဲ့ လူ တဈယောကျနား မှာ နရေတာထကျ စာရငျ အမြားကွီး ပိုကောငျးမယျ လို့ သူထငျတာပဲ ။ ခဏနတေော့ အိမျသာ အိုးပျေါမှာ ထိုငျရတာကို သူ… ငွီးငှလေ့ာပွနျတယျ။ ရခြေိုးခနျး အပွငျဘကျမှာ ရှိတဲ့ သောကျရအေေးအေးကို သူသောကျ ခငျြလာတယျ။ဒါပမေယျ့ အပွငျပွနျ ထှကျရငျ သားရနေံ့တှေ ထှကျနတေဲ့ သူမ နဲ့ ထပျ တှရေ့မှာ စိုး တာကွောငျ့ ရခြေိုးခနျးဘဇေငျမှာ ရှိတဲ့ ရကေို သောကျဖို့ သူကွိုးစား လိုကျတယျ။ သူကွိုးစား လိုကျပမေယျ လို့ မအောငျမွငျ လိုကျဘူး။ ရကေ ကလိုရငျးနံ့ တအားထှကျနတေယျ။ ဘုံဘိုငျ က ရကေို သောကျဖို့ သူ လကျလြှော့လိုကျပွီး အိပျခနျးထဲ ကို ပွနျလာခဲ့တယျ။အိပျခနျးထဲ မှာ သူမ က နိုးနပွေီ။ ဝတျစုံပွညျ့ နီးပါးတောငျပွနျ ဝတျပွီးနပွေီ။“ရမေခြိုးတော့ဘူးလား။”သူက မေးတော့ သူမခေါငျး ခါပွတယျ။ သူ (စိတျထဲကနေ) ထပျပွီးတော့ မကျြနှာကို မဲ့ရှဲ့ပဈ လိုကျတယျ။“ဒီည ရှုတငျ အမီပွနျ သှားရမယျ။ ရခြေိုးနရေငျ မမီတော့ ဘူး။ မိတျကပျ လညျး ပွငျရဦးမယျ။”လို့ သူမပွနျပွောရငျး သူသောကျမယျ လို့ ကွံရှယျ ထားတဲ့ ရဗေူး ကို ယူသောကျလိုကျတယျ။ “ဒီရဗေူး ကို သူပွနျ သှားရငျ ငါလှငျ့ပဈ လိုကျတော့မယျ။” လို့ သူတှေးလိုကျတယျ။“ရခြေိုး ခနျးထဲ ဝငျသှားတာ ကွာလိုကျတာ။ ကြှနျမတောငျ လိုကျလာဦး မလို့ပဲ။”သူ ဘာမှ မပွောလိုကျဘူး။ ပွောစရာတှေ ရှိပမေယျလို့ ဘာပွောရမယျမှနျး မသိတာကွောငျ့ သူဘာမှ မပွောလိုကျ ဘူး။ ဒါပမေယျလို့ ပွောကို ပွောရမယျ။ ဟုတျတယျ။သူမ မသှားခငျ မှာ သူ့စိတျထဲ တျောတျောကွာကွာ လိပျခဲ တညျးလညျး ဖွဈနတေဲ့ ဒီကိစ်စကို ပွောကိုပွောရမယျ။“ဒီနေ့ ရှငျ့ကွညျ့ ရတာတဈမြိုးပဲ။ ညက ကနြေပျမှု မရဘူးလား။”သူမ ဟာ လိငျမှုရေးရာ ကြှမျးကငျြ ပိုငျနိုငျတဲ့ မငျးသမီး တဈယောကျပဲ။ သူမဟာ အပွငျမှာ လညျး အခကွေးငှေ ယူပွီး လိငျမှုရေးရာ ဖွညျ့ဆညျးပေးနတေဲ့ လူတဈယောကျဖွဈတယျ။ သူကတော့ ခွှငျးခကျြပေ့ါ။ သူ့ကိုတော့ သူမ က တံခါး မရှိ ဓါး မရှိ အခြိနျမရှေး ဝငျထှကျ သှား လာခှငျ့ပေးထားတယျ။ဝငျထှကျ သှားလာခှငျ့ပေးထားတယျ လို့ ဆိုပမေယျလို့ မြားသော အား ဖွငျ့တော့ သူ ရှိရာကိုပဲ သူမ က အလာမြား ပါတယျ။ ဒီလို အကြှမျး တဝငျရှိနတေဲ့ အမြိုးသမီး တဈယောကျနဲ့အတူနေ ရတာ သူ့ဘကျ က ဘာမြား မကနြေပျစရာ အကွောငျးရှိမှာလဲ။ သူခေါငျးခါပွ လိုကျတယျ။“ဒါဆို ဘာဖွဈနတော လဲ။”သူမ က စိတျမရှညျ သလို မေးတယျ။အနားမှာ ရှိနေ တဲ့ စီးကရကျ တဈဝကျ ကို မီးညှိ လိုကျရငျး သူ … သူမ ကို ကွညျ့ လိုကျတယျ။ သူမ က သူ့အကွညျ့ ကို ပွနျတုံ့ပွနျရငျး တီဗှီထဲ မှာ သူပွုံးပွလရှေိ့တဲ့၊ အပွငျက သူ့ရဲ့ လိငျ အလုပျရှငျတှေ ကို ပွုံးပွလေ့ ရှိတဲ့ အပွုံးမြိုး ကို သူ့ကိုပွုံးပွတယျ။ သူမ ကိုကွညျ့ရတာ ဒီအပွုံး တဈမြိုးတညျး ပဲ ပွုံးတတျပုံပဲ။အပွုံး နဲ့တူတူ သူ့ အနားကို ပါ ရောကျလာတယျ။ သူ.. ကိုယျ ကို မသိမသာ ကြုံ့လိုကျရငျး သူမ ကိုမေးလိုကျတယျ။“ဒီညနေ ရှူ တငျ မသှား လို့ မရဘူးလား။ ကိုယျပွော စရာလေးရှိလို့။”သာမနျ အခြိနျတှေ ဆိုရငျတော့ သူ ဒီလိုပွောလိုကျရငျ ခေါငျးခါ မှာပဲ။ ဒါပမေယျလို့ ဒီညမှာ သူမ ဘကျက သူ့င်ျဆီ က တဈစုံတဈရာ ကို ထပျမံမြှျောလငျ့နသေေး ပုံ ရတာကွောငျ့ “ကောငျးပွီလေ” လို့ ပွနျပွောရငျး သူ့ရဲ့ မနျနဂြော ကို သူ ဒီည မလာနိုငျတော့ကွောငျး ဖုနျးဆကျပွောလိုကျ တယျ။ငါးမိနဈလောကျ အခွေ အတငျ ပွောကွပွီးနောကျ မှာ သူဖုနျးခြ လိုကျတယျ။ ဖုနျးခြ လိုကျပွီး “ဘာပွောမှာ လဲ။” လို့ သူ့ကို မေးတယျ။သူ ခြောငျး တဈခကျြ ဟနျ့လိုကျတယျ။“ကိုယျတို့ ပတျသကျနတော နှဈလကြျောပွီနျော။”ပွောလိုကျပွီး မှ သူ့ကိုယျသူ “ငါတျောတျော ညံ့တာပဲ” လို့တှေးလိုကျ မိတယျ။ တကယျဆို ဒီထကျ ပိုပေါကျရောကျ မယျ့ စကားမြိုးကို ရှေးပွောသငျ့ တာပေါ့။ဥပမာ .. “ ငါတို့ ပတျသကျ မှု ရပျလိုကျရအောငျ။” ဆိုတာမြိုးပေါ့။ ဒါမှ သူမဘကျက “ဘာဖွဈ လို့လဲ။ ” ဘာညာ မေးလာ မှာပေါ့။ ခုတော့ သူမက ပါးစပျကွီး ပိတျပွီး သူဆကျပွောမှာ ကို စောငျ့နေ တယျ။ (စောငျ့နပေုံရတယျ။)“ဒီလိုလေ။ ခုပတျသကျနတောကို ကိုယျပွနျပွီးတှေးကွညျ့လိုကျမိတယျ။ တကယျဆို မငျးနဲ့ကိုယျ မတှသေ့ငျ့ဘူးလို့ ကိုယျထငျတယျ။ မငျးနဲ့မှ မဟုတျပါဘူး။ကိုယျဘယျအမြိုးသမီးနဲ့မှ မတှသေ့ငျ့ဘူးလို့ ထငျတယျ။ ထငျနမေိတယျ။ ဒီလိုပွောလို့ ကိုယျ့ကို ဂေးလို့ မထငျနဲ့နျော။ ကိုယျဂေးမဟုတျတာ မငျးသိပါတယျ။ဒီတော့ .. ” သူ့ရဲ့ စကားလုံးတှေ ဟာ တောငျစဉျရေ မရဘူး။ ဒီလို သူလြှောကျပွောနေ တာတှေ ကို သူမ က စီးကရကျ တဈလိပျ ကို လကျကွားမှာ ညှပျရငျး ခပျပွုံးပွုံး အနအေထားနဲ့နားထောငျတယျ။ သူမ ကိုကွညျ့ရတာ သူမ ဘဝမှာ ဒီလို စကားလုံးတှေ က ကွားဖူးနကြေ စကားလုံးတှဖွေဈမယျ ထငျတယျ။ သူမကို ကွညျ့လိုကျ ရငျး သူဘာ ဆကျပွောရမလဲမသိတော့ တာကွောငျ့ တိတျတိတျလေး ပွနျနလေိုကျတယျ။
ဒီတော့ သူမ က ပွောလာတယျ။“ကြှနျမနဲ့ အဆကျအသှယျဖွတျခငျြပွီပေါ့။ ဒီလိုပေါ့။”သူ .. “ ဟုတျတယျ။” လို့ ခပျတိုးတိုးလေး(သာမနျထကျ တိုးတဲ့အသံနဲ့) ပွနျဖွလေိုကျတယျ။ သူမကိုတော့ မကွညျ့ပါဘူး။ သူမကတော့ ကွညျ့နမေယျဆိုတာသူသိနတေယျ။“ဘာကွောငျ့လဲမေးရငျ ရှငျဖွမှောလား။”ဖွမေယျလို့ သူဆုံးဖွတျလိုကျတယျ။“ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ မငျးက လကျရှိအရမျးနံမညျကွီးနတေဲ့ ရုပျရှငျမငျးသမီးလေ။”“ဒီတော့ ဘာဖွဈလဲ။”“ပွီးတော့ မငျးက လကျရှိ အိမျထောငျကွီးနဲ့လေ။”“ဒီတော့ရော ဘာဖွဈလဲ။”သူမ ပွနျမေးတာတှကွေောငျ့ သူဘာပွနျဖွရေမယျမှနျးမသိတော့ဘူး။ သူမက ဆကျပွောတယျ။“ ကြှနျမက လကျရှိနံမညျကြျော မငျးသမီးဖွဈနတေော့ ဘာဖွဈသလဲ။ ရှငျ့အတှကျ ဘာထိခိုကျသှားလို့လဲ။ လကျရှိ ကြှနျမက အိမျထောငျရှိနတေော့ရော ဘာဖွဈလဲ။ရှငျ့အတှကျ ဘာထိခိုကျသှားလို့လဲ။”“ကိုယျ မငျးရဲ့ အမွှောငျ လငျငယျ ဘဝနဲ့ မနနေိုငျတော့ဘူး။”“ဒါဆို ကြှနျမ ကို လကျထပျမလား။”“ဟငျ့အငျ။ ”“ကြှနျမ ထကျ ပိုပွီးကနြေပျစရာကောငျးတဲ့ လူတှထေ့ားတယျလား။”“ကိုယျ ခုနက ပွောပွီးပွီလေ။ တခွား ဘယျမိနျးမနဲ့မှ လညျး တှဖေို့ မရှိတော့ပါဘူးလို့။”“ခကျြခငျြးကွီး ဂေးသှား တာလား။”“ကိုယျခုနက အဲဒါကိုလညျး ပွောပွီးပွီလေ။”“ဒါဆို .. ” လို့ သူမစကားစ ပွီး ဆကျမပွောတော့ဘဲ ခေါငျးညိတျတယျ။သူ .. သူမကို ကွညျ့ပွီးဆကျပွောလိုကျတယျ။“ကိုယျ့မှာ မငျးနဲ့တှခေ့ါစက ခဈြသူရှိတယျ။ မငျးသိတယျနျော။”သူမ ခေါငျးညိတျတယျ။“အဲဒီ ခဈြသူနဲ့ ပွနျတှဲခငျြလို့လား။”“ကိုယျပွောတာ ဆုံးအောငျ နားထောငျပါ။”သူက သူစကားပွောနတေုနျး ဖွတျပွော တာ မကွိုကျဘူး။ သူကိုယျတိုငျ ကတော့ ဖွတျဖွတျပွော တတျ တဲ့ အကငျြ့ ရှိတယျ။ ဒါပမေယျ လို့ သူစကားပွောနတေုနျးသူမြားဖွတျပွောရငျ မကွိုကျဘူး။ သူပွောတာကို ဆုံးအောငျနားထောငျပွီး မှ ပွောခငျြရာ ကို ပွော ဖို့ သူမကို သတိပေးရတာ လညျး ဒီအခေါကျ နဲ့ဆို အခေါကျလေး ရာကြျောပွီ ထငျတာပဲ။လှတဲ့ မိနျးမတှေ (လှအောငျ ပွငျဆငျနတေတျတဲ့ မိနျးမတှေ) အတျော မြားမြား ဒီလိုပဲ ဒုံးဝေးကွ သလားလို့တောငျ သူတှေးမိတဲ့ အထိပဲ။“မငျးမှာ လညျး အိမျထောငျ ရှိတယျ။ ဒါနဲ့ လညျး ကိုယျတို့ အတူနခေဲ့ကွ တယျနျော။”သူမ ခေါငျးလညျး မညိတျ၊ ခေါငျး လညျး မခါဘူး။ သူ့ကိုပဲ စိုကျကွညျ့နတေယျ။သူ့ ရငျထဲမှာ ဖွဈနတေဲ့ လိပျခဲ တညျးလညျး ကိစ်စ ကို သူအခုပွောလိုကျတယျ။“မငျးက စိတျကနြေပျဖို့ကောငျးတဲ့ မိနျးမ တဈယောကျပါ။ ပွီးတော့ နိုငျငံကြျော ရုပျရှငျ မငျးသမီး တဈယောကျ။ မငျးနဲ့ တှဲသှား တှဲလာ လုပျရတာ အငျမတနျ သာယာဖို့ကောငျး ပါတယျ။ လူတိုငျး က ကိုယျ့ကို အားကတြဲ့ အကွညျ့တှနေဲ့ ၀ိုငျးကွညျ့ကွ တာကိုလညျး ကိုယျသာယာ ပါတယျ။ ကိုယျတှဲခဲ့ ဖူးတဲ့ ခဈြသူက မငျးလို ဘာမှ မပွညျ့စုံတာ လညျး အမှနျပဲ။ ”သူမ ပွုံးတယျ။ ကိုယျ့ကို ကိုယျ ဂုဏျယူ ဝငျ့ကွှားစှာ ပွုံးတဲ့အပွုံးမြိုး။ မိနျးမတှေ ပဲ ပွုံး တတျလေ့ ရှိတဲ့ အပွုံးမြိုး ။ အငျး . ဒီလိုပွောရတာ နညျးနညျးတော့ ကသိ ကအောကျနိုငျ(သလိုရှိ) တယျ။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ မိနျးမပွုံးတဲ့ အပွုံး ဆိုမှတော့မိနျးမတှေ ပဲ ပွုံးတတျမှာပေါ့။ ယောကျြားတှပွေုံးတဲ့အပွုံးမြိုးလညျး ယောကျြားတှပေဲ ပွုံးတတျမှာပဲ။ ဒါမဆနျးဘူး။ ခုနက သူ ပွောလိုကျတဲ့ စကားဟာ သူ့စိတျထဲကတကယျပါလို့ ပွောလိုကျတာ တဈဝကျကြျောကြျောပဲပါတယျ။ ကနျြတာက ညာတာပေါ့။ဥပမာပွောရမယျ ဆိုရငျ “ကိုယျ့ခဈြသူ က မငျးလို မပွညျ့စုံ ဘူး။” ဆိုတာပေါ့။ ဒါ.. မှားတယျ။မှားပွောလိုကျ တယျ ဆိုတာကိုလညျး သူ့ကိုယျသူ သိနတေယျ။ သူတှဲ ခဲ့ဖူးတဲ့ ခဈြသူက သာမနျပွညျသူတှေ ထဲက မိနျးကလေး တဈယောကျ ပဲ ဆိုတာတော့ မှနျပါတယျ။ဒါပမေယျ လို့ သူမလောကျ ဒုံးမဝေးဘူး။ သူမလောကျလညျး မလှဘူး။ အဲ … သူမလောကျ လညျး အခဈြရေးရာ မှာ မကြှမျးကငျြဘူး။
သူမကို ဒုံးဝေး တယျလို့သှားပွော လိုကျရငျ သူနောကျထပျ ထပျပွော မယျ့ စကားတှကေို နား မထောငျတော့ ဘဲ သူမ ထ ထှကျသှားမှာ ကို စိုးတာကွောငျ့ အရငျ ဆုံးမွှောကျ ပငျ့ပွော လိုကျ တယျ။ (နောကျမှ ရိုကျခမြယျ ဆိုတဲ့ သဘောနဲ့ပေါ့။ သူ အရငျတှဲဖူး တဲ့ မိနျးကလေး ဆို ရငျတော့ သူ အခုလို စကားလမျးကွောငျးနပွေီ ဆိုရငျ ဘာဆကျပွောတော့မယျ ဆိုတာကို ရိပျမိ မှာပဲ။ ဒါပမေယျ လို့ သူမ ကတော့ ခုနကပွောပွီးတဲ့ အတိုငျး ဒုံးဝေးတဲ့ အတှကျ သူဘာ ဆကျပွော မယျဆိုတာကို ရိပျမိပုံ မရဘူး။ ရိပျမိ ခငျြ လညျး ရိပျမိ မှာပေါ့လေ။မသိ ခငျြယောငျဆောငျနတော လညျး ဖွဈခငျြဖွဈမှာပေါ့။)“မငျးနဲ့ တူတူ အိပျရတဲ့ အခေါကျတိုငျး လညျး ကိုယျ အမွဲတမျးပြျောရှငျ သာယာ ခဲ့ရပါတယျ။ ဒါပမေယျ လို့ ကိုယျတို့ တှေ မှားနတေယျလို့ အမွဲ ခံစားနရေတယျ။ မငျးနဲ့ စတှကေ့တညျး ကပဲ။”“ဒါဆို ဘာလို့ ကြှနျမနဲ့ ဆကျအိပျ ခဲ့သေးလဲ။”“မငျးကို ကိုယျ သဘော ကလြို့ပေါ့။ဒါပမေယျလို့ သဘောကတြယျ ဆိုတာလေး တဈခုတညျး နဲ့တော့ မငျးနဲ့ ကိုယျ ဆကျတှဲနဖေို့ မသငျ့ဘူးလေ။ မငျး အားမနာပမေယျ လို့ မငျးအိမျထောငျ ကို ကိုယျအားနာလာပွီ။ ပွီးတော့ မငျးကို သဘော ကတြယျ ဆိုတာက မကွာခငျ မှာ မငျးလညျး အသကျတှကွေီး လာတော့ မှာပဲလေ။ အသကျကွီးလာပွီ ဆိုရငျ ခုလောကျတော့ စိတျကနြေပျ ဖို့ မကောငျးတော့မှာ အမှနျပဲ။အမှနျပွောရရငျ မငျးကို ကိုယျ သဘော ကတြာ မငျးရဲ့ အသကျ အရှယျ အရ မငျးရဲ့ကြှမျးကငျြ ပိုငျနိုငျမှုတှေ ကို သဘော ကတြာ။ ဒီထကျ မငျး အရှယျရငျ့ သှားရငျ မငျး ဒီလိုတှေ မစှမျးဆောငျနိုငျတော့ ရငျ မငျးကို ကိုယျသဘောကတြော့ မှာ မဟုတျဘူး။ မငျးနဲ့ မတှခေ့ငျ တုနျး က ကိုယျ က လူ့ကငျြ့ ဝတျတှေ စညျးမဉျြး စညျးကမျး ဆိုတာတှကေို လုံးဝ တသဝေ မတိမျး လိုကျနာ ခဲ့တဲ့လူပါ။
မငျးနဲ့တှေ့ မှ ကိုယျ ဘယျလိုဖောကျပွနျ သှားတယျ ဆိုတာကို ကိုယျ့ ကို ကျိုယျတောငျ မယုံနိုငျလောကျအောငျ ပဲ။ ဒါပမေယျလို့ မငျးနဲ့ အိပျပွီး တိုငျး ကိုယျ အတှေးဝငျတယျ။ ခဏတာလောကျ သာယာဖို့အတှကျနဲ့ ကိုယျတို့တှေ လူ့အဖှဲ့အစညျးကွီး ကို ဖောကျပွနျနေ မိကွပွီလို့။ ကိုယျတှေး မိတိုငျး အပွဈ ရှိသလို ခံစားရတယျ။ ပွီးတော့ မငျးအိမျထောငျ အပျေါမှာ အားနာတယျ။ ”စကားတှေ အမြားကွီးပွောပွီးတော့ သူ .. မောသှားတယျ။ အနားမှာ ရှိနတေဲ့ ရဗေူး ကို ကောကျမော့ လိုကျတယျ။ ရတှေေ ပါးစပျ ထဲရောကျပွီးသှား ကာမှ သတိရ လိုကျတယျ ။ ဒီရဗေူး ကို သူမ ခုနက ပါးစပျ မဆေး ဘဲ သောကျထားတယျ။ သူ .. သူမ ပွနျသှားရငျ လှငျ့ပဈ လိုကျတော့မယျ လို့ ကွံရှယျ ထားတဲ့ ရဗေူး။ခု သူ မပွေီ့းသောကျလိုကျ မိပွီ။ ရှံတာ လား မသတီ တာလား မသိတဲ့ ခံစားခကျြ တဈခုက သူ့ဗိုကျထဲ ကနေ မောကျတကျ လာတယျ။ သူမရှမှေ့ာ ဆိုတော့လညျး ရကေို ပွနျထှေးထုတျ လိုကျဖို့က အားနာနတေယျ။ သူ .. ရကေို ပါးစပျ ထဲ ငုံထားပွီး ရခြေိုးခနျး ထဲ ဝငျ လိုကျတယျ။ဘဇေငျ ထဲကို သူငုံထာ; တဲ့ရတှေေ ထှေးထုတျ ပဈလိုကျတယျ။ ပွီးတော့ ပွနျထှကျ လာလိုကျ တယျ ။ သူမကတော့ ခုနကနရော မှာ ခုနက ပုံစံအတိုငျးပဲ။ သူ့ကို တဈခုခုပွော ဖို့ စောငျ့နေ တာဖွဈ မယျ (လို့ သူထငျ တဲ့ အတှကျ သူမနား ကို သှားလိုကျတယျ။)။“ကြှနျမ အိမျထောငျ ကို ရှငျအားနာတယျ ။ ဟုတျလား။”သူ ခေါငျးညိတျ လိုကျတယျ။ သူမ က ခေါငျးခါတယျ။“ဒါဆို ကြှနျမ နဲ့ ပတျသကျတဲ့ လူ မှနျသမြှ ကြှနျမအိမျထောငျ ကို အားနာနရေတော့ မှာပဲ။”သူမ က ရယျသှမျးသှေး သလို ပွောတယျ။ သူဒေါသ ထှကျသှားတယျ။ သူက သူ့ကို တခွား လူတှေ နဲ့ နှိုငျးနှိုငျးပွီး မွငျတာမြိုး မကွိုကျဘူး။ (တကယျတော့ သူ ဟာလညျး တခွား လူတှနေဲ့ ဘာမှ မထူးခွား တဲ့ လူတဈယောကျ ပါပဲ။) သူ ပွောလိုကျတယျ။“တခွား လူတှနေဲ့ ကိုယျ့ ကို မနှိုငျးနဲ့လေ။ ကိုယျက ကိုယျပဲ။” သူမရယျတယျ။“ကြှနျမ မှာ အသကျမှေးဝမျးကွောငျး အလုပျနှဈခု ရှိတယျ။ တဈခု က ဗှီဒီယို ကငျမရာတှေ အရှေ့ မှာ သရုပျဆောငျ တာ။ နောကျတဈခု က ကြှနျမ ဘကျက ကုနျပစ်စညျးပေးပွီးသူတို့ က ငှကွေေးပေးတာ။ဒီနှဈခုလုံး က ကြှနျမ အတှကျ အသကျမှေးဝမျးကွောငျးဖွဈနတေဲ့ အတှကျ နှဈခုလုံး ကို ကြှနျမရှောငျ လို့မရဘူး။ အသကျမှေးဝမျးကွောငျး ဆိုတဲ့ စကားကို ရှငျနားလညျ ရဲ့လား။ နားမလညျ လညျး နားလညျ ခငျြယောငျ ဆောငျလိုကျပါ။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ကြှနျမ မရှငျး ပွတတျ လို့ပဲ။ကြှနျမ အသကျရှငျနထေိုငျနိုငျအောငျ အတှကျ ကြှနျမ ရထားတဲ့ အိမျထောငျ က ဘာမှ အသုံး မဝငျဘူး။ ဒီတော့ ကြှနျမ ဝမျးစာ ကြှနျမ ရှာတယျ။ ဒီ အလုပျကို လုပျနတေဲ့ အခြိနျမှာ င့ါကိုဘယျသူတှေ ဘယျလိုမွငျနမေလဲ ဆိုတဲ့ အတှေးမြိုး ကို ကြှနျမ မတှေးဘူး။ဘယျသူတှေ ဘယျလိုမွငျမွငျ ဒါ ကြှနျမ ရဲ့ အလုပျပဲ လို့ ကြှနျမ ခံယူထားတဲ့ အတှကျ ဒီအလုပျကို စိတျရှငျးရှငျးနဲ့ ကြှနျမ လုပျနိုငျတယျ။ ကြှနျမ အိမျထောငျ အတှကျ ရှငျ အား နာနတော ဆိုရငျတော့ ဒီ အတှကျနဲ့ ပူ စရာ ဘာမှ မလိုဘူး လို့ ကြှနျမပွောပါရစေ။”“ဒါပမေယျ လို့ မငျး အခုပွောနတေဲ့ လူတှကေ မငျးကို အခကွေးငှပေေးနတေဲ့ လူတှလေေ။ ကိုယျက မငျးကို အခ ကွေးငှပေေးနတေဲ့လူ မှ မဟုတျဘဲ။ ပွောရမယျ ဆိုရငျ သူမြား မယား ကွာခိုနရေုံ သကျသကျ လူပဲ။ ပိုကျဆံလညျး ပေးတာ မဟုတျဘူး။ တဈခါ တဈလမြေား ဆိုရငျ မငျး ကတောငျ ညစာ ဝယျကြှေးရသေးတယျ မဟုတျလား။ကိုယျဟာ သူမြား ဆောကျ ပွီးသား အိမျထဲ ပဲ ဝငျဝငျနတေတျ တဲ့ … အဲ .. အဲ .. ”“ဝငျကစှပျ ။”“အငျး အငျး .. ဝငျကစှပျ လို အကောငျ မြိုးပဲ။ ”သူမ ရယျတယျ။“ရှငျ့ကိုယျ ရှငျ ဒီလောကျ ထိ အထငျသေးနလေိမျ့မယျ လို့ ကြှနျမ မထငျ ထားဖူးဘူး။”သူမ စကားက သူ့ကို ကသိ ကအောကျ ဖွဈသှားစတေယျ။ သူ စကားပွောလိုကျတယျ။သူ စကားပွော ဖို့ ပါးစပျကို ဟလိုကျပမေယျ လို့ သူမ က လကျကာပွတဲ့ အတှကျ သူ စကားပွော ဖို့ပါးစပျ ကို ပွနျပိတျလိုကျတယျ။“ကြှနျမ အတှကျတော့ ဘာမှ မထူးခွားဘူး။ ဒီမှာ .. စဉျးစားကွညျ့စမျးပါ။ ကြှနျမ က နှဈဆယျ့လေး နာရီ အပွညျ့ လုံးလုံး အသကျမှေး ဝမျးကွောငျး အလုပျတှေ အတှကျပဲရုနျးကနျနရေတော့ မှာလား။ ကြှနျမ အတှကျ ပြျောရှငျ ဖို့ အခြိနျ ဆိုတာလေး မရှိသငျ့တော့ ဘူးလား။”“ကိုယျနဲ့နရေတာ မငျးပြျောလို့ လား။ ကိုယျ က မငျးတှဖေူ့း တဲ့ ယောကျြားတှေ လို မငျး ကို ပြျောရှငျ မှု အပွညျ့ အဝ ပေးနိုငျတဲ့ လူမြိုး မို့လို့လား။ ပွီးတော့ မငျးပြျော ခငျြရငျမငျး ကိုယျ ပိုငျ အိမျထောငျကွီး ရှိတာပဲ။ သူနဲ့ ပြျောလို့လညျး မငျးကို သူက ပိုကျဆံပေးမှာ မဟုတျဘူး။ ကိုယျ့လို ပဲပေါ့။ ဘာထူးခွားလို့လဲ။ ”“သူနဲ့လညျး ကြှနျမ တခါတလပြေျောပါတယျ။”သူ .. ဘာဆကျပွောရမလဲကို မသိတော့ဘူး။ ဒီမိနျးမ အတျောတော့ ပွောရဆိုရခကျတယျ။ တကယျတမျးတှေး ကွညျ့ရငျ သူဆိုတာက ပညာတှတေသီကွီးတတျတဲ့လူလညျး မဟုတျဘူး။ ရုပျခြော သဘောမနောကောငျး အလုပျကွိုးစား တဲ့လူမြိုးလညျး မဟုတျဘူး။ တဈနှဈဝငျငှဘေယျလောကျဆိုတာမြိုးအတိအကရြှိတဲ့ကောငျမြိုးလညျး မဟုတျဘူး။“ရှငျ ကြှနျမ ကို လကျထပျ မလား။”“ဟငျ့အငျ ။ ” လို့ သူမွနျမွနျ ဆနျဆနျ ပဲ ဖွလေိုကျတယျ။ သူမ ပွုံးတယျ။“ဟုတျတယျလေ။ ရှငျနဲ့ ကြှနျမကွား မှာ လကျထပျတယျ ဆိုတာ လိုမှ မလိုဘဲ။ ခုလညျး တူတူနနေေ ရတာပဲ။ လကျထပျ လိုကျရငျ လညျး တူတူနရေ မှာပဲ။ ဘာထူး သှားလို့လဲ။”“ဘာပဲပွောပွော မငျးကို ကိုယျ ပတျသကျနေ ရတာ လူ့အဖှဲ့အစညျးကွီး ထဲမှာ စညျးပကျြနေ သလိုဖွဈနတေယျ လို့ ခံစားနရေတယျ။ ဒီလို ခံစားနရေတဲ့ အတှကျ ကိုယျ့မှာ အခြိနျတိုငျးလို အပွဈဖွဈနတေယျ။ ကိုယျ ဒီလို မခံစားခငျြတော့ဘူး။ ကိုယျတို့ ထပျ မအိပျရအောငျ။”“ရှငျပွောတဲ့ လူ့အဖှဲ့ အစညျးကွီး ဆိုတာ ဘယျဟာ ကိုပွောတာလဲ။ လူ့အဖှဲ့အစညျးကွီး ထဲမှာ နမေယျ ဆိုရငျ ဒီ စညျးမဉျြး စညျးကမျးတှေ ကို လိုကျနာပါ .. လို့ ဘယျသူ က စ ပွော ခဲ့တာလဲ။ ရှငျပွော တဲ့ လူ့အဖှဲ့အစညျးကွီး ထဲက လူ ဘယျနှယောကျလောကျ က ရှငျပွော သလို အဲဒီ စညျးကမျးတှကေို လိုကျနာနတေယျ လို့ ရှငျထငျလို့လဲ။”ပွောရငျး ပွောရငျး သူမ ဒေါသ ထှကျလာ သလိုပဲ။ အသံကယျြ လာသလို စကားပွော လညျး မွနျ လာတယျ။ သူမ မေးခှနျးတှေ ကို သူ့ကိုယျ သူ ပွနျမေးလိုကျ မိတယျ။ သူ ..မဖွေ တတျဘူး။ ဘာတှေ မေးမှနျးလညျး မသိဘူး။ တကယျဆို လူဆိုတာက လူ့ကငျြ့ဝတျ နဲ့တော့ အညီနထေိုငျ ရမယျ (သငျ့တယျ) မဟုတျလား။“ဘာပဲဖွဈဖွဈ မငျးနဲ့ နရေတာ ကိုယျကြောမလုံဘူး။”“ကြှနျမ ကတော့ လုံတယျ။”
သူမ ကိုကွညျ့လိုကျတော့ သူမက သူ့ကို မကျြလုံးပွငျးပွငျးတှေ နဲ့ ပွနျကွညျ့နတော ကို တှရေ့ တယျ။ သူ ဘာမှ ဆကျမပွောဘဲ သူမကို ပွနျကွညျ့နလေိုကျတယျ။ သူမ က ဆကျပွောတယျ။“ရှငျ့ ကို ဒီလောကျ ထိ သူရဲဘောကွောငျလိမျ့မယျ လို့ ကြှနျမ ထငျမထားဘူး။ ကြှနျမကတောငျ ဘာမှ မဖွဈပါဘူး လို့ ဒီလောကျပွောနတော။ ရှငျက ဘာဖွဈနတောလဲ။
ကြှနျမနဲ့ နရေတာ ရှငျဘာ မြား နာကငျြ ထိခိုကျသှားရ လို့လဲ။ကြှနျမ ရှငျ့ ကို ဘာလုပျပေးပါ၊ ညာလုပျပေးပါ လညျး ပူဆာနတော မဟုတျဘူး။ ကြှနျမ မောပနျး လာတဲ့ အခြိနျတှေ မှာ ရှငျနဲ့ အျိပျခငျြတယျ။ ဒါမှ မဟုတျ ညလုံးပေါကျ ရှငျနဲ့စကားပွောနမေယျ။ ပွောခငျြ ပွောနမေယျပေ့ါ ကြှနျမ ဆိုလိုတာက..။ ဒါမှ မဟုတျ ရှငျနဲ့ ရုပျရှငျ ထှကျကွညျ့မယျ။ လြှောကျလညျ ကွမယျ။ ညလုံးပေါကျ ကားလြှောကျမောငျးမယျ။”“မငျးအိမျထောငျ နဲ့ ဒါတှလေုပျ လို့ရသားပဲ။”“သူ မအားဘူး။”သူ ပွောပွောပွီးပွီး ခငျြး သူမ က ဆကျပွောလိုကျတာဖွဈတဲ့ အတှကျ ရုတျတရကျ သူမ ဘာပွော လိုကျတယျ ဆိုတာ ကိုတောငျ သူ မသိလိုကျဘူး။ နောကျနညျးနညျးနေ မှ(သူ မအားဘူး) လို့ ပွောလိုကျတာပဲ လို့ နားလညျလိုကျတယျ။ မအားရအောငျ ဘာလုပျနေ လို့လဲလို့တော့ သူ မမေးလိုကျ ပါဘူး။ သူ့အိမျထောငျ က သူ့အလုပျနဲ့ သူ သိပျရှုပျတယျ ဆိုတာ သူသိ ထားတယျ။“ဒီမယျ .. ကြှနျမ တို့က လူမှုရေးဖောကျပွနျနတေယျ လို့ ရှငျမတှေး ဘဲ တဈဆိတျလောကျ ကြှနျမတှေးသလို တှေး ကွညျ့စမျးပါ။ဒါဆို ရှငျ ကြှနျမ ရငျထဲမှာ ဘာတှဖွေဈနတေယျ ဘယျလို ခံစားနရေတယျ ဆိုတာကို ရှငျ သိသှားလိမျ့မယျ။ ဘာလဲ … ကြှနျမ တို့က လူတှဖွေဈနတေဲ့ အတှကျ လူတှနေဲ့ဖှဲ့စညျးထားတဲ့အဖှဲ့အစညျးကွီး ထဲမှာ လူတှေ သတျမှတျထား တဲ့ စညျးကမျးတှကေို မလိုကျနာ ဘဲ နလေို့ မရဘူး လို့ ရှငျဆိုလို ခငျြတာလား။
မလိုကျနာဘဲ ကိုယျနခေငျြ သလိုရော ကိုယျ့ဟာ ကိုယျ နလေို့ မရဘူးလား။ မလိုကျ နာတော့ရော ဘယျသူ က ကြှနျမတို့ကို အသကျ ဆကျရှငျစဖေို့ နညျးလမျးတှေ လာပေးကွ သလဲ။ လိုကျနာတော့ရော ဘယျသူက ကြှနျမတို့ကို အသကျဆကျ ရှငျစဖေို့ နညျးလမျးတှေ လာပေးကွသလဲ။”“မငျး ဘုရားသခငျဟောခဲ့ တဲ့ အကွောငျးအရာတှေ ကို မရငျးနှီးဘူး ထငျတယျ။”
“နိုး .. ။ လူသတှေေ ရဲ့ စကားကို ကြှနျမ လကျမခံဘူး။ သူတို့ စကားတှဟော သူတို့ခတျေမှာ မှနျခငျြ မှနျခဲ့လိမျ့ မယျ။ ခုခတျေ မှာ လူတိုငျး အတှကျ သူတို့ စကားတှဟောမမှနျနိုငျတော့ ဘုး။ ဆိုလိုခငျြ တာက ဒိတျအောကျနပွေီ။”ဒီ မိနျးမ အတျောတော့ပွောရ ခကျတယျ။ ပွောရ ခကျပမေယျလို့ သူမပွောတော့ဘူး။ အခုဆှေးနှေးနေ တဲ့ ခေါငျးစဉျ ကလညျး ဘုရား သခငျ ယုံကွညျရေး မယုံကွညျရေးမဲခှဲနေ တာ မဟုတျဘူး။ သူ ပွောလိုကျတယျ။“မငျးနဲ့ ကိုယျ နဲ့ကတော့ အတှေးအချေါမှာ အတျော ကပွောငျးတိ ကပွောငျးပွနျဖွဈနေ တာပဲ။ ကိုယျ တို့ ဆကျညှိ လို့လညျး ရမှာမဟုတျဘူး။ ကိုယျ့ဘကျ ကတော့ ရှငျးတယျ ။ မငျး စီးပှားရေး အရ ကုနျပစ်စညျး နဲ့ ငှကွေေး လဲလှယျတာ ကို မပွောဘူး။ ဒါပမေယျလို့ မငျး အိမျထောငျအပျေါ မှာ အပွဈ ရှိသလို ခံစားရတဲ့ အတှကျ မငျးနဲ့မပတျသကျနိုငျတော့ ဘူး။”သူမ က တဈခုခု ကို သဘောကြ သလို ပွုံးတယျ။ ပွီးတော့ ရယျတယျ။
“ကြှနျမ ကတော့ ပတျသကျ မှာ။ ရှငျ နောကျတဈယောကျ နဲ့ ပတျသကျခငျြသေးလား။ ရတယျ ပွသနာ မရှိဘူး။ ကြှနျမ ရှငျ့ဆီ ကတောငျးဆို တာက ကြှနျမ နဲ့ ညအတူ
အိပျပေး ဖို့။ ဒီလောကျ ပဲ။ ကနျြတာ ဘာမှမလိုဘူး။”“ကိုယျ့ ဘကျက ကနျြတာတှေ အားလုံးပေးနိုငျတယျ လို့ အာမ မခံနိုငျဘူး။ ကိုယျ့အခွေ အနေ လညျး မငျးသိတဲ့ အတိုငျးပဲ။ ဒါပမေယျ လို့ သခြောတာ တဈခုကတော့ မငျးတောငျး ဆိုတဲ့ (ဒီလောကျပဲ) ဆိုတဲ့ အခကျြ ကို ကိုယျ မလိုကျလြောနိုငျဘူး။ ကိုယျပွောခငျြတာက..။ ”“ကြှနျမ ဘာလုပျပေး ရငျ လိုကျလြောနိုငျမလဲ။”
အတျော မှ အတျော ကို ခကျတဲ့ အမြိုးသမီး နဲ့ ထိပျတိုကျကွီး သူလာတှနေ့တောပဲ။ သူ .. မကျြနှာကွကျ ကို မော့ကွညျ့ပွီး လပွေငျး တဈခကျြ မှုတျထုတျ လိုကျတယျ။
မကျြနှာကွကျ မှာ တိမျပုံလေးတှေ ဆှဲထားပွီး တိမျ မရှိတဲ့ တခွားနရောတှေ ကိုတော့ ကွကျသှေးရောငျ ရယျ မိုးပွာရောငျ ရယျ ခွယျထားတယျ။ ကွယျကလေးတှလေညျး ပါတယျ။
သူတို့ အိပျယာ နဲ့ တညျ့တညျ့ကွီး မှာ မှနျ အကွီးကွီးတဈခပျြ ကပျထားပေးတယျ။သူတို့ အတူ အိပျကွတဲ့ အခြိနျ တုနျးက ဒီမှနျကွီး ကို သူ သတိ မထားမိဘူး။ ခု မော့လိုကျမှ
ပထမဆုံး မွငျမိတာပဲ။ မဆိုးဘူး လို့ သူတှေးလိုကျတယျ။ တဈခကျြလောကျတော့ သူ မကျြနှာ ကွကျ အပွငျ အဆငျကို ငေးနမေိသေးတယျ။ ဒါပမေယျလို့ ငါ စကားပွောရဦးမှာ ပဲလို့ တှေးလိုကျမိ တဲ့ အတှကျ သူ ခေါငျးပွနျ ငုံ့ပွီး သူမ ကိုကွညျ့လိုကျတယျ။“ကိုယျတို့ လကျထပျကွ မလား။ ခု လကျရှိ မငျး အိမျထောငျကို ကှာလိုကျ။ ဒါဆို အလုပျဖွဈပွီ။”
သူမ ခေါငျးခါတယျ။“ကြှနျမ လိုခငျြတာ ပြျောဖို့သကျသကျပဲ။ ပြျောဖို့ သကျသကျ တဈခုတညျး နဲ့တော့ ဘာကိစ်စနဲ့ ကြှနျမ အိမျထောငျ ကို ကှာရမှာ တဲ့လဲ။ ကြှနျမ အိမျထောငျက ကြှနျမကို ခဈြတယျ ။ ရှငျ ကြှနျမ ကို ဒီလိုခဈြနိုငျ မှာ မို့လို့လား။” သခြော တာပေါ့။ သူ ဘယျခဈြနိုငျမလဲ။
သူမ ကို သူ ပတျသကျခဲ့ တာကလညျး ခဈြလို့ မှ မဟုတျဘဲ။ တကယျတမျး မှာလညျး သူမကို သူ တဈသကျလုံးပေါငျးဖို့ ရညျရှယျခကျြ မရှိပါဘူး။ ခုတောငျ မပေါငျး ခငျြတော့ဘူး။
ဒါပမေယျ လို့ တျောတျော ခှကတြဲ့ မိနျးမ ပဲ။ ဒီလို ဆိုတော့လညျး ဟငျ့အငျ၊ ဟိုလိုဆိုတော့ လညျး ဟငျ့အငျ ။ သူ ဘာဆကျလုပျရမှာလဲ။ သူတို့ ဆှေးနှေးပှဲဟာ ဒီလိုပဲ လယျတယျ လယျတယျ ဖွဈနတေယျ။အခြိနျ အတျောကွာတဲ့ အထိ သူမ နဲ့ သူ စကား မပွောဖွဈဘူး။ နှဈယောကျလုံး ကုတငျမှေ့ ရာပျေါမှာ ထောငျ့မှနျ အနေ အထားနဲ့ ထိုငျနေ မိကွတယျ။ သူ စကားပွောဖို့ သူမဘကျ လှညျ့ လိုကျတော့ သူမ သူ့ဘကျ လှညျ့လာတာနဲ့ ကွုံတယျ။“မငျး အရငျပွောပါ။” လို့ သူ က ပွောလိုကျတော့ သူမက ပွောတယျ။
“တဈခါတဈလေ မှာ ကိုယျလုပျ ခငျြတာကို လုပျနိုငျ ဖို့ စညျးကမျးတှေ ကငျြ့ဝတျတှေ ဆိုတာကို ခဏလောကျ မထေ့ား သငျ့ မထေ့ားရတယျ ဆိုတာမြိုး ရှငျတကယျ မသိဘူးလားဟငျ။”
သူမ အသံက နူးညံ့နတေယျ။ ခုနက ဂယကျ ရိုကျနလေို့ ကယျြလောငျနေ ခဲ့တဲ့ သူ့အသံက သူမ ရဲ့ နူးညံ့တဲ့ အသံ ကွောငျ့ ခပျတိုးတိုးပွနျဖွဈသှားတယျ။သူ သကျပွငျးခြ လိုကျတယျ။
“ကိုယျ တှေးဖူး ပါတယျ။ ဒါပမေယျ လို့ ကိုယျ တို့က လူတှဖွေဈနတေဲ့ အတှကျကွောငျ့… ”“ဘာလို့ ဒါကို ပဲ ခဏခဏ ထပျထပျပွောခငျြနရေ တာလဲ။ ”
သူမ ဒေါသ နဲ့ ကုတငျပျေါကနေ ဝုနျး ကနဲ ခုနျထ လိုကျတယျ။ ရုတျတရကျ ခုနျထလိုကျ တာကွောငျ့ သူမပေါငျပျေါ မှာ တငျထားတဲ့ ပိုကျဆံအိတျကွမျးပွငျပျေါ ပွုတျ ကသြှား တယျ။ (သူမ ကတော့ သူမ ရဲ့ဒေါသ ကိုပဲ သတိပွုနတေဲ့ အတှကျ ပိုကျဆံအိတျ ကသြှားတဲ့ အပျေါမှာသတိပွု မိဟနျ မရှိပါဘူး။) ဒေါသထှကျနေ တဲ့ သူမ ဟာ ကုတငျပျေါထိုငျနေ တဲ့ သူ့ကို ငုံ့ကွညျ့နတေယျ။ သူ ဘာမှ မပွော လိုကျဘူး။ သူမ ကိုပဲ ပွနျကွညျ့နလေိုကျတယျ။ သူမ သကျပွငျးခတြယျ။ ဒေါသတှနေဲ့ပေါ့။“ဒီအကွောငျး ကိုပဲ ခဏခဏ ဆှေးနှေးနရေတာ ပငျပနျးပွီ လို့ ရှငျ မထငျဘူးလား။ ကြှနျမ လိုခငျြတာ ကို ရှငျ့ကို ပွောပွီးပွီ။ ရှငျ လညျး ရှငျ လိုခငျြတာကို ကြှနျမကို ပွောပွီးပွီ။ ပွီးတော့ လညျး ကြှနျမ တို့ ထပျတှနေ့ကွေတာပဲ။ ဒီအပတျထဲ မှာတငျ ဒီအကွောငျး ကို ရှငျနဲ့ ကြှနျမ ဆှေးနှေးကွတာ ခွောကျခေါကျ ရှိနပွေီ။ ရှငျ ဘာလို့ ဒီအကွောငျးကို ပဲ ခဏခဏ ထပျထပျပွောခငျြနရေ တာလဲ။ ရှငျ ရူးနတော လား။ ကြှနျမ မောလှပွီ။”သူ မရူးဘူးလို့ စိတျထဲ က ပွောလိုကျတယျ။ ဘာလို့ ရူးရမှာလဲ။ ဒီ အပတျထဲမှာ သူမနဲ့ ဘာ အကွောငျးမှ ကို မဆှေးနှေး ရသေးဘူး။ သူမ နဲ့ ဒီအပတျ ထဲ တှတေ့ာလညျး ဒါပထမဆုံး ပဲ။ ရူးခငျြ ရူး သူမ ရူးနတောလို့ သူ သတျမှတျလိုကျ တယျ။ ဘာဆကျပွောရမယျ ဆိုတာကိုလညျး သူမသိတော့ဘူး။ တှေးလညျး မတှေးတော့ဘူး။ မတှေးလညျး မတှေးခငျြတော့ဘူး။
အခနျး ဟာ နကြေ သှားပမေယျလို့ အပူဒဏျ ကနျြခဲ့တာကွောငျ့ မတရား ပူလောငျနတေယျ။ သူ့ရှမှေ့ာ ရပျနတေဲ့ သူမကွောငျ့ ပိုပွီး ပူနတေယျ(လို့ ခံစားရတယျ။) ။ သူ .. သူမကို တဈခကျြကွညျ့ပွီး ခေါငျးငုံ့လိုကျတယျ။မတျတပျ အနအေထားနဲ့ သူမ ခဏရပျနပွေီး ခဏနတေော့ သူ့နား မှာ ဖှဖှ ရရ လာထိုငျ တယျ ။ သူ့ရဲ့ ဆံပငျတှေ ကို တယုတယ ပှတျသပျတယျ။ သူ့ရဲ့ နှုတျခမျးနဲ့လညျကုပျ ကိုရောပဲ။ပွီးတော့ သူ့နား အနား ကို ကပျပွီး သူမတိုးတိုးလေး ပွောတယျ။“ရှငျ ဒီနေ့ ဆေးသောကျပွီးပွီလားဟငျ။”သူ ဆေးသောကျ ဖို့ မလိုတော့ဘူး ဆိုတဲ့ အကွောငျး သူမ ကို မပွောလိုကျဘူး။ နောကျ တဈခါ ဆို ဒီလို အယူအဆ မတူ တဲ့ မိနျးမမြိုးတှေ နဲ့ ထပျပွီး မပတျသကျတော့ ဖို့ သူဆုံးဖွတျ လိုကျ တယျ။ သူ့ဟာ သူ မငျးသမီး မကလို့ ဘာပဲဖွဈဖွဈ။သူ ငွိမျနတော ကို သူမ ခဏလောကျကွညျ့ပွီး ကွမျးပွငျပျေါ မှာ ကနြတေဲ့ သူမရဲ့ အိတျ ကို ပွနျကောကျ ယူလိုကျ တယျ။ (ကွညျ့ရတာ ပွနျတော့မယျ့ ပုံပဲ။) ပွီးတော့ သူ့နား မှာ လာပွနျ ထိုငျတယျ “ရှငျ ဒီည နားဖို့ လိုအပျနတေဲ့ ပုံပဲ။ နားလိုကျတော့နျော။ မနကျဖွနျ ည ဒီမှာပဲ ထပျတှေ့ ကွသေး တာပေါ့။”
သူ ဘာမှ မပွောလိုကျဘူး။ တဈကိုယျလုံး ဟာ လေးလံတောငျ့တငျးနေ သလို ခံစားရတယျ။ သူ အိပျခငျြနပွေီ။သူမ သူ့ နားထငျ ကို နမျးပွီး အသာ ထထှကျသှား တာကို သိလိုကျတယျ။ ပွီးတော့ သူမ အိပျခနျး တံခါး ကို ခကျြခနဲမွညျအောငျ ပွနျပိတျပေးသှားတာ ကိုလညျး သိလိုကျတယျ။မနကျဖွနျ ည ဆိုတာ ကို သူ ရငျ မခုနျဘူး။ ရငျ မခုနျတော့ဘူး။ သူ့စိတျထဲ မှာ အိပျခငျြ လာ တယျ။ ခကျြခငျြး ဆိုသလိုပဲ သူ ကုတငျပျေါမှာ ပွနျပွီး အိပျပြျောသှားတယျ။